जीवनमा प्रवेश (४) | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जीवनमा प्रवेश (४)
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४८३
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वासमा तैँले परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्नैपर्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४८४
यदि तैँले परमेश्‍वरबाटको नयाँ ज्योति स्वीकार गर्न सक्दैनस्, र परमेश्‍वरले आज गर्नुहुने सबै कार्यलाई बुझ्न सक्दैनस् र तँ यसलाई खोजी गर्दैनस्, वा यसलाई तँ शङ्का गर्छस्, यसको न्याय गर्छस्, वा यसलाई जाँच र विश्लेषण गर्छस् भने, परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्ने मन तँसँग छैन। यहाँ र अहिलेको ज्योति प्रकट हुँदा, तैँले हिजोको ज्योतिलाई मात्र बहुमूल्य ठानिराख्छस् र परमेश्‍वरको नयाँ कार्यलाई विरोध गर्छस् भने, तँ मूर्खभन्दा बढी केही होइनस्—तँ जानी-जानी परमेश्‍वरलाई विरोध गर्ने व्यक्ति होस्। परमेश्‍वरको आज्ञाकारी हुने कार्यको चाबीचाँहि नयाँ ज्योतिप्रति कृतज्ञ हुनु, र यसलाई स्वीकार गर्न सक्नु र यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्नु हो। यही नै साँचो आज्ञाकारीता हो। परमेश्‍वरप्रति तृषित नहुनेहरू नै उद्देश्यका साथ उहाँमा समर्पित हुन नसक्ने मानिसहरू हुन्, र आफ्ना यथास्थितिमा सन्तुष्ट भएको फलस्वरूप तिनीहरूले परमेश्‍वरको विरोध मात्र गर्न सक्छन्। त्यस मानिसहरूले परमेश्‍वरको आज्ञालाई पालन गर्न नसक्नुको कारण के हो भने, ऊ पहिले आएको कुराको बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ। पहिले आएका कुराहरूले मानिसहरूलाई परमेश्‍वरका बारेमा अनेक किसिमका धारणाहरू र अनुमानहरू प्रदान गरेका छन्, र तिनीहरूका मनमा यी कुराहरू परमेश्‍वरको स्वरूप बनेको छ। यसरी, तिनीहरूले विश्‍वास गर्ने कुराहरू आफ्नै धारणाहरू र तिनीहरूका आफ्नै कल्पनाका मापदण्डहरू हुन्। यदि तैँले आज वास्तविक काम गर्नुहुने परमेश्‍वरलाई तेरो कल्पनाको परमेश्‍वरसँग तुलना गर्छस् भने, तेरो विश्‍वास शैतानबाट आउँछ, र तेरा आफ्नै प्राथमिकताहरूद्वारा दूषित पारिएको हुन्छ, परमेश्‍वरले यस किसिमको विश्‍वास चाहनुहुन्न। तिनीहरूका योग्यताहरू जति नै उच्च भए पनि, र तिनीहरू समर्पित नै भएपनि—तिनीहरूले उहाँका काममा पूरै जीवनका प्रयासहरू समर्पण गरेका भएपनि, तिनीहरूले आफैलाई शहीद तुल्याएका भएपनि—यस किसिमको विश्‍वास भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई परमेश्‍वरले स्वीकार गर्नुहुन्न। उहाँले तिनीहरूमाथि थोरै अनुग्रह मात्र दिनुहुन्छ र केही समयका लागि यसको आनन्द लिन दिनुहुन्छ। यस किसिमका व्यक्तिहरू सत्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न असक्षम हुन्छन्। पवित्र आत्माले तिनीहरूभित्र काम गर्नुहुन्न, र परमेश्‍वरले तिनीहरू प्रत्येकलाई हटाउनुहुनेछ। जवान र वृद्ध जो भए पनि, आफ्नो विश्‍वासमा परमेश्‍वरको आज्ञापालन नगर्ने र गलत अभिप्राय बोकेर हिँड्ने मानिसहरू विरोध गर्ने र बाधा दिने मानिसहरू हुन् र त्यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्‍वरले हटाउनुहुनेछ भन्नेमा कुनै प्रश्न छैन। जो परमेश्‍वरप्रति अलिकति पनि आज्ञाकारी छैनन्, जसले उहाँको नामलाई त्यतिकै स्वीकार गर्छन्, र परमेश्‍वरको दयालुपन र प्रेमिलोपनको बारेमा केही जानेका हुन्छन्, र पनि पवित्र आत्माका कदमहरूलाई पछ्याउँदैनन्, र पवित्र आत्माका वर्तमान कार्य र वचनहरूलाई पालना गर्दैनन् भने—यस्ता मानिसहरू परमेश्‍वरको अनुग्रहले मात्र बाँचेका हुन्छन्, र तिनीहरूलाई उहाँले लिनुहुनेछैन वा सिद्ध पार्नुहुनेछैन। परमेश्‍वरले मानिसहरूका आज्ञाकारिताद्वारा, परमेश्‍वरको वचनलाई खाने, पिउने र यसमा आनन्द मनाउने, र तिनीहरूका कार्यद्वारा, र तिनीहरूका जीवनमा आउने दुःख र शोधनद्वारा परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ। यस किसिमको विश्‍वासद्वारा मात्र मानिसहरूका भित्री स्वभाव परिवर्तन हुनेछ, र त्यसपछि मात्र तिनीहरूले परमेश्‍वरको साँचो ज्ञान प्राप्त गर्नेछन्। परमेश्‍वरको अनुग्रहमा बाँचेर मात्र सन्तुष्ट नभई, सक्रिय रूपमा सत्यतालाई चाहने र खोज्ने, र परमेश्‍वरद्वारा केही कुरा प्राप्तिका लागि खोजी गर्ने—सचेत भएर परमेश्‍वरको आज्ञा पालन गर्नु भनेको यही नै हो र उहाँले चाहनुहुने विश्‍वास पनि यही नै हो। परमेश्‍वरको अनुग्रहमा आनन्द गर्ने बाहेक अरू केही कुरा नगर्ने व्यक्तिहरूलाई सिद्ध पार्न वा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। अनि तिनीहरूका आज्ञाकारीता, भक्ति, प्रेम, र धैर्यता सबै सतही मात्र हुन्। परमेश्‍वरको अनुग्रहमा मात्र रमाउनेहरूले परमेश्‍वरलाई साँचो रूपमा चिन्न सक्दैनन्, अनि तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई चिने भने पनि, तिनीहरूको ज्ञान सतही हुन्छ, र “परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ,” वा “परमेश्‍वर मानिसहरूप्रति करुणामय हुनुहुन्छ” भन्ने जस्ता कुराहरू तिनीहरू गर्छन्। यसले मानिसको जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, र मानिसहरूले साँच्चै परमेश्‍वरलाई चिनेका छन् भन्ने कुरालाई पनि देखाउँदैन। जब परमेश्‍वरको वचनले तिनीहरूलाई शोधन गर्छ, वा उहाँका जाँचहरू तिनीहरूमाथि आउँछन्, मानिसहरूले परमेश्‍वरको आज्ञा पालन गर्न सक्दैनन्—बरु, तिनीहरू शङ्कालु हुन्छन्, र पतन हुन्छन्—तब तिनीहरू अलिकति पनि आज्ञाकारी भएका हुँदैनन्। तिनीहरूभित्र, परमेश्‍वरमा राखिएको विश्‍वास सम्बन्धी धेरै नियमहरू र प्रतिबन्धहरू, धेरै वर्षको विश्‍वासका नतिजा स्वरूप आएका पुराना अनुभवहरू, वा बाइबलमा आधारित विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छन्। के यस किसिमका मानिसहरूले परमेश्‍वरको आज्ञा पालन गर्नसक्छन्? यी मानिसहरू मानवीय कुराहरूले भरिएका हुन्छन्—तिनीहरूले कसरी परमेश्‍वरको आज्ञा पालन गर्नसक्छन्? तिनीहरूका “आज्ञाकारीता” व्यक्तिगत प्राथमिकता अनुसार हुन्छन्—के परमेश्‍वरले यस किसिमको आज्ञाकारीता चाहनुहुन्छ? यो परमेश्‍वरमा भएको आज्ञाकारीता होइन, तर सिद्धान्तप्रतिको भक्ति हो। यो आत्म-सन्तुष्टि र आत्म-कृतज्ञता हो। यदि तँ यो परमेश्‍वरप्रति गरिएको आज्ञाकारीता हो भनी भन्छस् भने, के तैँले उहाँको निन्दा गरिरहेको हुँदैनस् र? तँ मिश्री फारो जस्तो भइस्। तैँले दुष्ट काम गरिरहेको छस्, र तैँले विशेषगरी आफैलाई परमेश्‍वरको विरोध गर्ने काममा लगाएको छस्—के तैँले परमेश्‍वरलाई यसरी नै सेवा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ? तैँले तुरुन्तै पश्‍चाताप गरेर केही स्व-चेतना प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु नै राम्रो हुन्छ। यसमा तँ असफल भइस् भने, तँ टाढा जानु नै असल हुन्छ; परमेश्‍वरप्रतिको तेरो सेवा सम्बन्धी झूटो घोषणाले भन्दा त्यसले तँलाई बढी फाइदा गर्नेछ। तँ बाधा र अवरोध बन्‍नेछैनस्; तँलाई आफ्नो स्थान थाहा हुन्छ, र त्यहाँ राम्रोसँग जिउँछस्—के त्यो तेरो लागि अझै असल हुँदैन र? परमेश्‍वरको विरोध गरेकोमा तैँले दण्ड पनि पाउनेछैनस्!
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४८५
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४८६
परमेश्‍वरले गर्नुहुने काम एक अवधिदेखि अर्को अवधिमा फरक-फरक हुने गर्छ। यदि तँ कुनै एक चरणमा परमेश्‍वरले गर्नुभएको कामप्रति एकदमै आज्ञाकारी हुन्छस् तर अर्को चरणमा उहाँको कामप्रति तेरो आज्ञाकारीता कमजोर छ भने, वा तैँले आज्ञापालन गर्न नै सक्दैनस् भने, परमेश्‍वरले तँलाई छाड्नुहुनेछ। यदि परमेश्‍वरले यो कदम चाल्नुहुँदा तैँले कदममा कदम मिलाउँछस् भने, परमेश्‍वरले अर्को कदम उठाउनुहुँदा पनि तैँले कदममा कदम मिलाउन जारी राख्नुपर्छ; त्यसपछि मात्र तँ पवित्र आत्माको आज्ञापालन गर्ने व्यक्ति हुन सक्छस्। तैँले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने भएकोले, तँ आफ्नो आज्ञाकारीतामा अटल रहनुपर्छ। तैँले केवल आफूलाई मन लागेको बेलामा आज्ञापालन गर्ने अनि आफूलाई मन नलागेको बेलामा आज्ञापालन नगर्ने गर्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारको आज्ञाकारीतालाई परमेश्‍वरले प्रशंसा गर्नुहुन्‍न। यदि मैले सङ्गति गरेको नयाँ कामको गतिलाई तैँले पछ्याउन सक्दैनस् भने, र अघिल्‍ला कुराहरूमा अल्झिरहन्छस् भने, तेरो जीवनमा कसरी प्रगति हुनसक्छ र? परमेश्‍वरको काम भनेको उहाँका वचनहरूद्वारा तँलाई आपूर्ति गर्नु हो। जब तैँले उहाँका वचनहरूको आज्ञापालन गर्छस् वा तिनलाई स्वीकार गर्छस्, तब पवित्र आत्माले अवश्य पनि तँमाथि काम गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्माले मैले जे बोल्छु ठ्याक्कै त्यस्तै गर्नुहुन्छ; मैले भनेको जस्तै गर्, अनि पवित्र आत्माले तुरुन्तै तँमाथि काम गर्नुहुनेछ। तिमीहरूले हेर्नको लागि म एक नयाँ ज्योति छाड्छु र तिमीहरूलाई वर्तमानको ज्योतिभित्र ल्याउँछु, र जब तँ यो ज्योतिमा हिँड्छस्, तब पवित्र आत्माले तुरुन्तै तँमाथि काम गर्नुहुनेछ। केही अटेरी व्यक्तिहरू पनि छन् जो भन्छन्, “म तपाईंले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्दै गर्दिनँ।” यो अवस्थामा म तँलाई भन्छु कि तँ अब मार्गको अन्त्यमा आइपुगेको छस्; तँ सुकिसकेको छस् र तँसँग अब बाँकी जीवन नै छैन। तसर्थ, आफ्नो स्वभाव रूपान्तरणको अनुभव गर्दा तैँले वर्तमान ज्योतिसँग कदममा कदम मिलाउनुभन्दा महत्वपूर्ण अरू केही छैन। पवित्र आत्माले परमेश्‍वरले प्रयोग गर्नुहुने केही निश्चित व्यक्तिहरूमाथि मात्र काम गर्नुहुन्न, बरु थप रूपमा उहाँले मण्डलीमा पनि काम गर्नुहुन्छ। उहाँले जोकोहीमाथि काम गरिरहनुभएको हुनसक्छ। उहाँले वर्तमान समयमा तँमाथि काम गर्न सक्नुहुन्छ र तैँले यो काम अनुभव गर्नेछस्। अर्को अवधिमा, उहाँले अर्को कोही व्यक्तिमा काम गर्न सक्नहुन्छ, त्यो अवस्थामा तैँले पछ्याउनको लागि हतारिनुपर्छ; तैंले वर्तमान ज्योतिलाई जति नजिकबाट पछ्याउँछस् तेरो जीवन त्यति नै वृद्धि हुन सक्छ। कुनै व्यक्ति जुनसुकै तौरतरिकाको भए तापनि, यदि पवित्र आत्माले तिनीहरूमाथि काम गर्नुहुन्छ भने, तैँले पछ्याउनैपर्छ। तिनीहरूका अनुभवहरूलाई आफ्ना अनुभवहरूको नजरबाट हेर्, अनि तैँले अझ उच्च कुराहरू प्राप्त गर्नेछस्। यसो गर्दा तँ अझ चाँडो अघि बढ्नेछस्। यो मान्छेको लागि सिद्धताको मार्ग अनि जीवन वृद्धि हुने माध्यम हो। पवित्र आत्माको कामप्रतिको तेरो आज्ञापालन मार्फत सिद्ध तुल्याइने मार्गमा पुगिन्छ। परमेश्‍वरले तँलाई सिद्ध तुल्याउन कस्तो प्रकारको व्यक्तिमार्फत काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तँलाई थाहा हुँदैन, न त कस्तो प्रकारको व्यक्ति, घटना, वा वस्तुमार्फत उहाँले तँलाई वस्तुहरू प्राप्त गर्न वा हेर्न दिनुहुन्छ भन्ने कुरा नै तँलाई थाहा हुन्छ। यदि तैँले यो सही मार्गमा पाइला टेक्न सकिस् भने, परमेश्‍वरद्वारा तँलाई सिद्ध पारिने ठूलो आशा छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। यदि तैँले सक्दैनस् भने, यसले तेरो भविष्य धमिलो, ज्योति विहीन छ भन्ने देखाउँछ। तैँले सही मार्गमा हिँड्न थालेपछि, तैँले सबै कुराहरूमा प्रकाश प्राप्त गर्नेछस्। पवित्र आत्माले अरूलाई जेसुकै प्रकाश गर्नुभए पनि, यदि तँ तिनीहरूको ज्ञानको आधारमा आफै अनुभव लिन अघि बढ्छस् भने, त्यो अनुभव तेरो जीवनको एक हिस्सा बन्नेछ र तैँले त्यो अनुभवको आधारमा अन्य व्यक्तिहरूलाई आपूर्ति गर्न सक्नेछस्। सुगारटाइ गरेर अन्य व्यक्तिहरूलाई वचन आपूर्ति गर्नेहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन जोसँग अनुभवहरू पटक्कै हुँदैन; तैँले तेरो आफ्नो वास्तविक अनुभव र ज्ञानको बारेमा बोल्न सुरु गर्नुअघि, अन्य व्यक्तिहरूको अन्तर्ज्ञान र ज्योतिमार्फत तैँले अभ्यासको तरिका पत्ता लगाउन सिक्नुपर्छ। यो तेरो आफ्नै जीवनको लागि ठूलो फाइदाको कुरो हुनेछ। तैँले परमेश्‍वरबाट आउने सबै कुराको आज्ञापालन गर्दै यसरी अनुभव गर्नुपर्छ। तैँले तेरो जीवन वृद्धि हुन सकोस् भनेर सबै कुराहरूमा परमेश्‍वरको इच्छा प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र सबै कुराहरूमा पाठ सिक्नुपर्छ। त्यस्तो अभ्यासले सबैभन्दा चाँडो प्रगति हासिल हुन्छ।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४८७
पवित्र आत्माको कामको अनुभव गर्नेमध्ये सबै जनाले जीवन प्राप्त गर्न सक्छन् भन्‍ने छैन, न त यो प्रवाहमा भएका व्यक्तिहरूले नै जीवन प्राप्त गर्न सक्छन्। जीवन भनेको सबै मानव जातिको साझा सम्पत्ति होइन, अनि सबै मानिसहरूले स्वभावको परिवर्तन सहजै हासिल गर्न सक्छन् भन्‍ने छैन। परमेश्‍वरको कामप्रतिको समर्पणता यथार्थ र वास्तविक हुनुपर्छ, अनि यो समर्पणतामा जिउनुपर्छ। सतही समर्पणताले मात्रै परमेश्‍वरको स्याबासी प्राप्त गर्न सक्दैन, र आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न नखोजिकनै परमेश्‍वरका वचनहरूका सतही पक्षहरूको मात्र आज्ञापालन गर्नु ‍परमेश्‍वरको हृदय अनुसारको हुनु होइन। परमेश्‍वरको आज्ञापालन र परमेश्‍वरको कामप्रतिको समर्पणता दुवै एउटै र उस्तै कुरा हुन्। परमेश्‍वरप्रति मात्र समर्पित हुने तर उहाँको कामप्रति समर्पित नहुने व्यक्तिहरूलाई आज्ञाकारी मान्‍न सकिँदैन, सच्चा रूपमा समर्पित नहुने बरु बाहिरी रूपमा चापलुसी गर्ने व्यक्तिहरूलाई आज्ञाकारी मानिने त झन् कुरै नगरौं। परमेश्‍वरप्रति सच्चा रूपमा समर्पित हुने व्यक्तिहरू सबैले परमेश्‍वरको कामबाट फाइदा लिन सक्छन् र परमेश्‍वरको काम र स्वभावको बारेमा बुझाइ हासिल गर्न सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र आफूलाई सच्चा रूपमा परमेश्‍वरप्रति समर्पित गर्न सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन् अनि नयाँ कामबाट तिनीहरूमा नयाँ परिवर्तन आउन सक्छ। यी व्यक्तिहरूलाई मात्र परमेश्‍वरले स्याबासी दिनुहुन्छ, यी व्यक्तिहरूलाई मात्र सिद्ध तुल्याइन्छ, र यी व्यक्तिहरू मात्र स्वभाव परिवर्तन भएका व्यक्तिहरू हुन्। परमेश्‍वरले स्याबासी दिनुभएका व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जो खुशीसाथ परमेश्‍वरप्रति र उहाँका वचन र कामप्रति समर्पित हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै सही हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै इमान्दारीपूर्वक परमेश्‍वरलाई चाहन्छन् र इमान्दारीपूर्वक परमेश्‍वरको खोजी गर्छन्। जहाँसम्म परमेश्‍वरमाथिको आफ्नो विश्‍वासबारे मुखले मात्र बोल्ने तर सार रूपमा उहाँलाई सराप्ने व्यक्तिहरूको कुरा छ, ती व्यक्तिहरू मकुन्डो ओढ्ने व्यक्तिहरू हुन् जोसँग सर्पको विष हुन्छ; तिनीहरू सबैभन्दा बढी विश्‍वासघाती व्यक्तिहरू हुन्। ढिलो-चाँडो ती बदमासहरूले आफ्नो मकुन्डो उतारिएको पाउनेछन्। के यो आज गरिँदै गरिएको काम यही होइन र? दुष्ट मानिसहरू सधैँ दुष्ट नै हुन्छन्, र तिनीहरू कहिल्यै पनि दण्डको दिनबाट उम्कनेछैनन्। असल मानिसहरू सधैँ असल नै हुन्छन् र परमेश्‍वरको कामको अन्त्य हुँदा तिनीहरूलाई प्रकाश गरिनेछ। दुष्टहरूमध्धे एक जनालाई पनि धर्मी मानिनेछैन, न त एक जना पनि धर्मीलाई नै दुष्ट मानिनेछ। के मैले कुनै मानिसलाई गलत रूपमा आरोपित हुन दिनेछु र?
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४८८
तेरो जीवन अघि बढ्दै जाँदा तैँले नयाँ प्रवेश र नयाँ, उच्च अन्तर्ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ जुन हरेक कदमसँगै अझ गहन हुँदै जान्छ। सबै मानव जाति प्रवेश गर्नुपर्ने यही नै हो। सङ्गति गरेर, धार्मिक उपदेशहरू सुनेर, परमेश्‍वरका वचनहरू पढेर वा केही कुराहरू सम्हालेर, तैँले नयाँ अन्तर्ज्ञान र अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नेछस् अनि तँ पुराना नियमहरू र पुराना समयहरूमा बाँच्नेछैनस्; तँ सधैँ नयाँ ज्योतिमा जिउनेछस् र तँ परमेश्‍वरका वचनहरूबाट टाढा भट्किनेछैनस्। सही मार्गमा लाग्नु भनेकै यही हो। सतही तहमा कुनै मूल्य चुकाउँदैमा त्यसले केही काम गर्नेछैन; दिन प्रतिदिन परमेश्‍वरको वचन उच्च क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ, र हरेक दिन नयाँ कुरा देखा पर्छ, र मानिसले पनि हरेक दिन नयाँ प्रवेश गर्नुपर्छ। परमेश्‍वरले बोल्नुभए जस्तै उहाँले आफूले बोल्नुभएका सबै कुराहरूलाई सफलतामा पुर्‍याउनुहुन्छ, र यदि तैँले त्यसलाई पछ्याउन सक्दैनस् भने तँ पछि पर्नेछस्। तँ तेरा प्रार्थनाहरूमा अझ गहिराइमा जानुपर्छ; परमेश्‍वरको वचन खाने र पिउने कार्य रोकी-रोकी गरिनु हुँदैन। तैँले प्राप्त गर्ने अन्तर्दृष्टि र ज्योतिलाई गहन पार्दै जा अनि तेरा धारणाहरू र कल्पनाहरू चाहिँ क्रमिक रूपले घट्दै जानुपर्छ। तैँले तेरो निर्णयको क्षमतालाई पनि दरिलो पार्नुपर्छ, र तैँले जेसुकै सामना गरे तापनि, यसको बारेमा तँसँग तेरा आफ्नै सोच अनि तेरा आफ्नै दृष्टिकोणहरू हुनुपर्छ। आत्मामा भएका केही कुराहरूलाई बुझेर तैँले बाह्य कुराहरूको बारेमा अन्तर्ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ र कुनै पनि विषयहरूको सार बुझ्नुपर्छ। यदि तँ यी कुराहरूले सुसज्जित छैनस् भने, तैँले कसरी मण्डलीको अगुवाइ गर्न सक्छस्? यदि तैँले कुनै वास्तविकता विना नै र अभ्यासको कुनै तरिका विना नै केवल अक्षरहरू र धर्मसिद्धान्तहरूको मात्रै कुरा गर्छस् भने तँ छोटो अवधिको लागि मात्र अघि बढ्न सक्नेछस्। नयाँ विश्‍वासीहरूको अगाडि बोल्दा यो कुरा सीमित रूपमा स्वीकार्य हुनसक्छ, तर केही समयपछि, नयाँ विश्‍वासीहरूले केही वास्तविक अनुभवहरू प्राप्त गरिसकेपछि, तैँले तिनीहरूका निम्ति उप्रान्त आपूर्ति गर्न सक्नेछैनस्। तब तँ कसरी परमेश्‍वरको प्रयोगको लागि योग्य हुन्छस्? नयाँ अन्तर्दृष्टि विना, तैँले काम गर्न सक्दैनस्। नयाँ अन्तर्दृष्टि नभएका व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू हुन जसलाई कसरी अनुभव गर्ने भन्ने नै आउँदैन, र त्यस्ता व्यक्तिहरूले कहिल्यै पनि नयाँ ज्ञान वा नयाँ अनुभव प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अनि, जीवनको आपूर्ति गर्ने कुरामा, तिनीहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो कार्य गर्न सक्दैनन्, न त तिनीहरू परमेश्‍वरको प्रयोगको लागि नै योग्य हुन्छन्। यस प्रकारको व्यक्ति व्यर्थको हुन्छ, केवल रद्दीको टुक्रा मात्र हुन्छ। वास्तवमा, त्यस्ता मानिसहरू काम सम्‍बन्धी आफ्नो कार्य गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ हुन्छन्, तिनीहरू सबै व्यर्थका हुन्छन्। तिनीहरू आफ्नो कार्य गर्न मात्र असफल हुँदैनन्, बरु वास्तवमा तिनीहरूले त मण्डलीमा अति नै अनावश्यक भार पनि पार्छन्। म यी “आदरणीय प्रौढ मानिसहरू” लाई चाँडो गरी मण्डली छाड्न आग्रह गर्दछु ताकि अन्य व्यक्तिहरूले तँलाई अब फेरि हेर्नु नपरोस्। त्यस्ता मानिसहरूसँग नयाँ कामको बारेमा कुनै बुझाइ हुँदैन र तिनीहरू अन्त्यहीन धारणाहरूले भरिपूर्ण हुन्छन्। तिनीहरूले मण्डलीमा केही पनि कार्य गर्दै-गर्दैनन्; बरु, तिनीहरूले जताततै बदमासी र नकारात्मकता फैलाउँछन्, यहाँसम्‍म कि तिनीहरू मण्डलीमा सबै प्रकारका खराब आचरण र बाधा-व्यवधानमा संलग्न समेत संलग्‍न हुन्छन्, र त्यसरी तिनीहरूले सही र गलत छुट्याउन नसक्नेहरूलाई अन्योलता र भद्रगोलतातर्फ धकेल्छन्। यी जीवित दियाबलसहरूले, यी दुष्ट आत्माहरूले, जतिसक्दो चाँडो मण्डली छाड्नुपर्छ, होइन भने तेरो कारण मण्डलीमा दाग लाग्छ। तँ आजको कामदेखि डराउँदैनस् होला, तर के तँ भोलिको धर्मी सजायदेखि पनि डराउँदैनस् त? मण्डलीमा यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो केवल भातमाराहरू हुन् र यस्ता धेरै ब्‍वाँसाहरू छन् जो परमेश्‍वरको सामान्य कामलाई ध्वंस गर्न खोज्छन्। यिनीहरू सबै भूतको राजाले पठाएका भूतहरू हुन्, यिनीहरू दुष्ट ब्‍वाँसाहरू हुन् जो निर्दोष थुमाहरूलाई निल्न चाहन्छन्। यदि यी तथाकथित मानिसहरूलाई निष्कासित गरिएन भने तिनीहरू मण्डलीका परजीवी बन्नेछन्, भेटीहरू खाइदिने कीराहरू बन्नेछन्। ढिलो-चाँडो, यी तिरस्कारयोग्य, मूर्ख, नीच र घृणित कीराहरूलाई दण्ड दिने दिन आउनेछ!
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४८९
व्यावहारिकता र परमेश्‍वरको कामको पूर्ण बुझाइको ज्ञानको प्राप्त गर्नु—यी दुवै उहाँका वचनहरूमा देखिन्छन्, र यी वचनहरूद्वारा मात्र तैँले अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सक्छस्। यसैले परमेश्‍वरको वचनले सुसज्जित हुनका निम्ति तैंले धेरै कुरा गर्नुपर्छ। सङ्गतिमा परमेश्‍वरका वचनहरूबारे तेरो ज्ञानको बारेमा बता, र यसरी तँ अरूलाई ज्ञान दिन र तिनीहरू बाहिर निस्कने मार्ग दिन सक्छस्—यो एउटा व्यावहारिक मार्ग हो। परमेश्‍वरले तेरो लागि वातावरण मिलाउनुभन्दा अघि, तिमीहरू प्रत्येकले पहिले आफैलाई उहाँको वचनले सुसज्जित पार्नुपर्छ। यो हरेकले गर्नुपर्ने कुरा हो; यो एक जरुरी प्राथमिकता हो। पहिले, एउटा यस्तो स्थितिमा पुग् जहाँ तैँले परमेश्‍वरको वचन कसरी खाने र पिउने सो जान्नेछस्। तैंले गर्न नसक्ने कुनै पनि कुराका निम्ति अभ्यास गर्ने मार्ग भेट्टाउन उहाँका वचनहरूमा खोज्, र तैंले नबुझेका कुनै पनि विषयहरू वा तँमाथि आउन सक्ने कुनै कठिनाइहरूका लागि ती वाणीहरूलाई जाँचेर हेर्। परमेश्‍वरका वचनहरूलाई तेरो खाद्य भण्डार बना, र तेरा व्यावहारिक कठिनाइहरू र समस्याहरूको समाधान गर्न तिनको सहायता ली; साथै उहाँको वचनलाई तेरो जीवनको सहायता बना। यी कुराहरू गर्नको लागि तेरो तर्फबाटको कोसिसको आवश्यक पर्दछ। परमेश्‍वरको वचन खाँदा र पिउँदा, तैंले परिणामहरू प्राप्त गर्नैपर्छ; तैंले उहाँको अघि आफ्नो हृदय शान्त बनाउन सक्नुपर्छ, र तैंले जब-जब समस्याहरूको सामना गर्छस् त्यसबेला तैंले उहाँका वाणीहरू अनुसार अभ्यास गर्नैपर्छ। जब तैँले कुनै समस्याहरूको सामना गरेको हुँदैनस्, त्यसबेला तैंले उहाँका वचनहरू खाने र पिउने कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ। कहिलेकहीँ तैँले प्रार्थना गर्न र परमेश्‍वरको प्रेममाथि चिन्तन गर्न सक्छस्, सङ्गतिमा परमेश्‍वरको वचनबाट तैंले बुझेका कुराहरू बताउन सक्छस्, अनि तैंले आफूभित्र अनुभव गरेको अन्तर्दृष्टि र प्रकाशको बारेमा र ती वाणीहरू पढ्दा तँमा उत्पन्न भएका प्रतिक्रियाहरूको बारेमा बताउन सक्छस्। यसबाहेक, तैँले मानिसहरूलाई उम्कने मार्ग दिन सक्छस्। यो मात्र व्यावहारिक हुन्छ। यसो गर्नुको उद्देश्य भनेको परमेश्‍वरका वचनहरूलाई तेरो व्यावहारिक खाद्य भण्डार बनाउनु हो।
एक दिनको अवधिमा, तैंले कति घण्टा बिताउँछस्, जुन बेला तँ साँच्चै परमेश्‍वरको सामु हुन्छस्? तेरो दिनको कति समय वास्तवमा परमेश्‍वरलाई दिइन्छ? देहलाई कति समय दिइन्छ? व्यक्तिको हृदयलाई सधैँ परमेश्‍वरमा केन्द्रित गर्नु भनेको उहाँद्वारा सिद्ध पारिने सही बाटोमा हुनुको पहिलो कदम हो। यदि तैँले आफ्नो हृदय, शरीर, र तेरा सबै साँचो प्रेम परमेश्‍वरमा अर्पण गर्न सक्छस् भने, तिनलाई उहाँको सामु राख्, उहाँप्रति पूर्ण आज्ञाकारी बन् र उहाँको इच्‍छालाई पूर्ण रूपमा ध्यान दे—परमेश्‍वरको वचनलाई सबै कुराको सिद्धान्त र आधारको रूपमा लिँदै, देहको लागि होइन, परिवारका लागि होइन, र तेरा आफ्नै व्यक्तिगत चाहनाहरूका लागि होइन, तर परमेश्‍वरको परिवारको हितका लागि—त्यसो गर्दा तेरा अभिप्रायहरू र तेरा दृष्टिकोणहरू सबै सही ठाउँमा हुनेछन्, र तँ परमेश्‍वरको सामु त्यो व्यक्ति बन्‍नेछस् जसले उहाँको स्याबासी पाउनेछ। परमेश्‍वरले मन पराउनुहुने मानिसहरू ती हुन् जो पूर्ण रूपमा उहाँतर्फ छन्; तिनीहरू ती हुन् जो पूर्ण रूपमा उहाँमा समर्पित हुन सक्छन्। जसलाई परमेश्‍वरले घृणा गर्नुहुन्छ तिनीहरू ती हुन् जो उहाँतर्फ आधा हृदयका हुन्छन् र जसले उहाँको विरुद्धमा विद्रोह गर्छन्। उहाँले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ, जसले उहाँमा विश्‍वास गर्छन् र सधैँ उहाँबाट आनन्द लिन चाहन्छन्, तर उहाँका निम्ति आफूलाई समर्पित गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ हुन्छन्। उहाँले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ जसले उहाँलाई प्रेम गर्छौं त भन्छन्, तर आफ्नो हृदयमा उहाँको विरुद्धमा विद्रोह गर्छन्; उहाँले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ जो छलकपट गर्न प्रभावकारी र लोभ्याउने वचनहरूको प्रयोग गर्छन्। जो साँचो रूपमा परमेश्‍वरमा समर्पित हुँदैनन् वा जो साँचो रूपले उहाँको अगि समर्पित हुँदैनन् तिनीहरू विश्‍वासघाती र स्वभावले अति नै अहङ्कारी हुन्छन्। जुन मानिसहरू सामान्य, व्यावहारिक परमेश्‍वरको अगाडि साँचो रूपले समर्पित हुन सक्दैनन्, तिनीहरू अझ बढी अहङ्कारी हुन्छन्, र तिनीहरू विशेष गरी प्रधान दूतको कर्तव्य पालन गर्ने सन्तान हुन्। जुन मानिसहरूले वास्तवमा परमेश्‍वरका लागि आफैलाई समर्पित गर्छन् तिनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्व उहाँको सामु राख्छन्; तिनीहरू साँचो रूपमा उहाँका वाणीहरूमा समर्पित हुन्छन्, र उहाँका वचनहरूलाई अभ्यास गर्न सक्छन्। तिनीहरूले परमेश्‍वरका वचनहरूलाई आफ्नो अस्तित्वको आधार बनाउँदछन्, र तिनीहरूले कुन भागहरू अभ्यास गर्नुपर्छ भनी परमेश्‍वरका वचनहरूमा निरन्तर खोजी गर्न सक्छन्। साँचो रूपमा परमेश्‍वरको सामु जिउने मानिसहरू तिनीहरू नै हुन्। यदि तैँले जे गर्छस् त्यो तेरो जीवनको निम्ति फाइदाजनक छ भने, र तेरो जीवन स्वभाव रूपान्तरण होस् भनेर उहाँका वचनहरू खाएर अनि पिएर तँ आफ्ना आन्तरिक आवश्यकताहरू र कमीहरूलाई पूरा गर्न सक्छस् भने त्यसले परमेश्‍वरको इच्छालाई सन्तुष्ट पार्दछ। यदि तँ परमेश्‍वरका आवश्यकताहरू अनुरूप काम गर्छस् र यदि तैँले शरीरलाई सन्तुष्ट पार्दैनस् तर उहाँको इच्छा पूरा गर्छस् भने, त्यसमा तँ उहाँका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गरेको हुन्छस्। जब परमेश्‍वरको वचनहरूमा वास्तविक रूपले प्रवेश गर्ने कुरा गरिन्छ, त्यसको अर्थ तैँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्छस् र परमेश्‍वरका मागहरूलाई पूरा गर्न सक्छस् भन्ने हुन्छ। यस प्रकारका व्यावहारिक कार्यहरूलाई मात्र उहाँको वचनको वास्तविकतामा प्रवेश गर्नु भनी भन्‍न सकिन्छ। यदि तँ यस वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सक्छस् भने तँमा सत्यता हुन्छ। यो वास्तविकता प्रवेशको सुरुआत हो; तैँले पहिले यो तालीम लिनुपर्छ, त्यसपछि मात्र तँ अझ गहिरा वास्तविकताहरूमा प्रवेश गर्न सक्‍नेछस्। आज्ञाहरू कसरी पालन गर्नुपर्छ र परमेश्‍वरको सामु कसरी बफादार हुनुपर्छ त्यो विचार गर; तँ कहिले राज्यमा प्रवेश गर्न सक्षम हुनेछस् भन्नेबारे मात्र निरन्तर नसोच्। यदि तेरो स्वभाव परिवर्तन हुँदैन भने, तैंले जे सोचे पनि त्यो व्यर्थ हुनेछ! परमेश्‍वरको वचनहरूको वास्तविकता प्रवेश गर्नको निम्ति, पहिले तँ त्यस ठाउँमा पुग्नुपर्छ जहाँ तेरा सबै योजना र विचारहरू परमेश्‍वरका लागि नै हुन्छन्—यो सबैभन्दा मूल आवश्यकता हो।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरलाई साँच्चै प्रेम गर्नेहरू ती हुन् जो उहाँको व्यावहारिकताप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सक्छन्” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९०
वर्तमानमा, त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जो परीक्षाको बीचमा परेका छन् र जसले परमेश्‍वरको कामलाई बुझ्दैनन्, तर म तँलाई भन्छु: यदि तैंले यो बुझ्दैनस् भने, तैंले त्यसको बारेमा निर्णय नगर्नु नै राम्रो हुनेथियो। सायद सत्यता त्यसको सम्पूर्णतामा प्रकट हुने दिन आउनेछ, त्यसपछि तैँले बुझ्नेछस्। न्याय नगर्नु तेरो लागि लाभदायक हुन्छ, तैपनि तैँले निष्क्रिय बनेर पर्खनु हुँदैन। तैंले सक्रियता साथ प्रवेश गर्न खोज्नुपर्छ; तब मात्र तँ त्यो व्यक्ति बन्नेछस् जो साँच्चै प्रवेश गर्दछ। मानिसहरू तिनीहरूको विद्रोहको कारण, सधैँ व्यावहारिक परमेश्‍वरको बारेमा धारणाहरू बनाउँछन्। यसले गर्दा सबै मानिसहरूले कसरी समर्पित हुनुपर्छ सो सिक्‍नु आवश्यक छ, किनकि व्यावहारिक परमेश्‍वर मानवजातिका लागि एउटा ठूलो परीक्षा हुनुहुन्छ। यदि तँ दृढ रहन सक्दैनस् भने सबै समाप्त हुन्छ; यदि तँसँग व्यावहारिक परमेश्‍वरको व्यावहारिकताको बारेमा बुझाइ छैन भने, तब तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पारिने योग्यको हुनेछैनस्। मानिसहरूले परमेश्‍वरको व्यावहारिकतालाई बुझ्नु नै तिनीहरू सिद्ध हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। देहधारी परमेश्‍वर पृथ्वीमा आउनुभएको तथ्यको व्यावहारिकता प्रत्येक व्यक्तिका निम्ति परीक्षा हो; यदि तँ यस सम्बन्धमा दृढ रहन सक्छस् भने, तब तँ परमेश्‍वरलाई चिन्ने र उहाँलाई साँच्चै प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनेछस्। यदि यस सम्बन्धमा तँ दृढ रहन सक्दैनस् र तैँले आत्मामा मात्र विश्‍वास गर्छस् र परमेश्‍वरको व्यावहारिकतामा विश्‍वास गर्न सक्दैनस् भने, परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वास जति नै ठूलो भए पनि त्यो व्यर्थ हुनेछ। यदि तँ देखिने परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न सक्दैनस् भने, के तँ परमेश्‍वरका आत्मामा विश्‍वास गर्न सक्छस्? के तैंले परमेश्‍वरलाई मूर्ख तुल्याउन खोजिरहेको छैनस् र? तँ देख्न र छुन सकिने परमेश्‍वरको अगि समर्पित हुँदैनस्, त्यसो भए के तँ आत्माको सामु समर्पित हुन सक्छस्? आत्मा अदृश्य र छुन नसकिने हुनुहुन्छ, त्यसैले जब तँ परमेश्‍वरको आत्माको अधीनमा छु भनी भन्छस्, तब तैंले मूर्ख कुरा गरिरहेको हुँदैनस् र? आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुका निम्ति मुख्य कुरा भनेको व्यावहारिक परमेश्‍वरलाई बुझ्नु हो। तैंले व्यावहारिक परमेश्‍वरलाई बुझेपछि, तँ आज्ञाहरू पालन गर्न सक्षम हुनेछस्। ती पालन गर्नको निम्ति दुई वटा मुख्य तत्वहरू छन्: एउटा उहाँका आत्माको सारमा दृढ हुनु, र आत्माको सामु आत्माको परीक्षा स्वीकार्न सक्‍नु हो; अर्को, देहधारी शरीरको बारेमा सही बुझाइ प्राप्त गर्नु, र वास्तविक अधीनता हासिल गर्न सक्‍नु हो। चाहे देहको अगि होस् वा आत्माको अगि, व्यक्तिको मनमा सधैँ परमेश्‍वरप्रति समर्पण र आदर हुनुपर्छ। यस्तो व्यक्ति मात्र सिद्ध हुने योग्यको हुन्छ। यदि तँमा व्यावहारिक परमेश्‍वरको व्यावहारिकताको ज्ञान छ भने—अर्थात् यदि तँ यस परीक्षामा दृढ भएर खडा भइस् भने-तेरो निम्ति केही पनि अत्याधिक हुँदैन।
कतिपय मानिसहरू भन्छन्, “आज्ञाहरू पालन गर्नु सजिलो छ; परमेश्‍वरको सामु हुँदा खुल्ला रूपमा र भक्ति पूर्वक बोले पुग्छ, र कुनै इसारा गर्नु हुँदैन; आज्ञाहरू पालन गर्नु भनेको यही हो।” के यो सही कुरा हो? यसैले, यदि तँ परमेश्‍वरको पिठिउँ पछाडि उहाँको विरोध हुने केही कुराहरू गर्छस् भने के त्यसलाई आज्ञाहरू पालन गरेको मान्न सकिन्छ? आज्ञाहरू पालन गर्ने कार्यमा के-के कुरा समावेश हुन्छन् त्यसबारे तँमा पूरा ज्ञान हुनुपर्छ। यो कुरा तँमा परमेश्‍वरको व्यावहारिकताको वास्तविक बुझाइ छ कि छैन भन्ने कुरासित सम्बन्धित हुन्छ; यदि तँमा व्यावहारिकताको बुझाइ छ र यो परीक्षाको अवधिमा तँ डगमगाउँदैनस् र लड्दैनस् भने, तँमा बलियो गवाही छ भनेर मान्न सकिन्छ। परमेश्‍वरको लागि गुञ्जायमान गवाही दिने कुरा मुख्य रूपले तँसँग व्यावहारिक परमेश्‍वरको बारेमा बुझाइ छ कि छैन र तँ यो व्यक्तिमा समर्पित हुन, मृत्युसम्‍म समेत समर्पित हुन सक्छस् कि सक्दैनस् भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ, जो व्यक्ति साधारण मात्र हुनुहुन्‍न तर सामान्य पनि हुनुहुन्छ। यदि, समर्पणताद्वारा तैँले साँच्चै परमेश्‍वरको गवाही दिन्छस् भने, त्यसको अर्थ तँलाई परमेश्‍वरले प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने हुन्छ। यदि तँ मृत्युसम्‍मै अधीनमा बस्न सक्छस् र उहाँको अगि गुनासो मुक्त हुन्छस्, कुनै दोष लाउँदैनस्, कुनै निन्दा गर्दैनस्, कुनै धारणाहरू राख्दैनस् र कुनै गुप्त अभिप्रायहरू राख्दैनस् भने यसरी परमेश्‍वरले महिमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। एक सामान्य, मानिसद्वारा हेला गरिएको व्यक्तिको अगाडि समर्पित हुनु र कुनै धारणाहरू नराखी मृत्युसम्म समर्पित हुन सक्नु—साँचो गवाही यही हो। मानिसहरू जुन वास्तविकताभित्र पसून् भन्ने परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ त्‍योचाहिँ तँ उहाँका वचनहरू पालन गर्न सक्ने, तिनलाई अभ्यास गर्न सक्ने, व्यावहारिक परमेश्‍वर अगाडि झुक्न र तेरा आफ्नै भ्रष्टतालाई जान्न सक्ने, उहाँको सामु तेरो हृदय खोल्‍न, र अन्त्यमा उहाँका यी वचनहरूमार्फत उहाँद्वारा प्राप्त हुन सक्‍ने व्यक्ति बन् भन्ने हो। जब यी वाणी हरूले तँलाई जित्दछ र तँलाई पूर्ण रूपमा उहाँको आज्ञाकारी बनाउँदछ तब परमेश्‍वरले महिमा प्राप्त गर्नुहुन्छ; यसद्वारा उहाँले शैतानलाई लाजमा पार्नुहुन्छ र उहाँको काम पूरा गर्नुहुन्छ। जब तँमा देहधारी परमेश्‍वरको व्यावहारिकताको बारेमा कुनै धारणा हुँदैन—अर्थात्, जब तँ यो परीक्षामा दृढ भएर खडा हुन्छस्—तब तैँले यो गवाही राम्रोसँग बोकेको हुन्छस्। यदि तैँले यस व्यावहारिक परमेश्‍वरलाई पूर्ण रूपमा बुझ्ने र पत्रुसजस्तै मृत्युसम्म समर्पित हुन सक्‍ने दिन आउँछ, तब तँलाई परमेश्‍वरले प्राप्त गर्नुहुनेछ र सिद्ध तुल्याउनुहुनेछ। परमेश्‍वरले गर्नुहुने कुनै पनि कुरा तेरा धारणाहरूसँग मेल खाँदैन भने त्यो तेरो लागि परीक्षा हो। यदि परमेश्‍वरको काम तिम्रो विचारसँग मेल खान्थ्यो भने त्यसका निम्ति तैँले दुःख भोग्नु वा तँलाई शुद्ध पारिनु आवश्यक हुँदैनथियो। उहाँको काम अति व्यावहारिक र तेरा धारणाहरू अनुरूप नभएकोले तैँले ती धारणाहरूलाई छोड्नुपर्छ। त्यसैकारणले गर्दा यो तेरो लागि एउटा परीक्षा हो। परमेश्‍वरको व्यावहारिकताको कारणले नै सबै मानिसहरू परीक्षाहरूका बीचमा छन्; उहाँको काम व्यावहारिक छ, अलौकिक होइन। कुनै पनि धारणाहरू नराखी उहाँका व्यावहारिक वचनहरू र उहाँको व्यावहारिक वाणीहरू पूर्ण रूपमा बुझेर, अनि उहाँको काम अझ बढी व्यावहारिक हुँदै जाँदा उहाँलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्न सकेर, तँलाई उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिने मानिसहरूको समूह ती हुन् जसले परमेश्‍वरलाई चिन्छन्; अर्थात्, तिनीहरू जसले उहाँको व्यावहारिकतालाई जान्दछन्। यसबाहेक, तिनीहरू ती हुन् जो परमेश्‍वरको व्यावहारिक कामप्रति समर्पित हुन सक्छन्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९१
परमेश्‍वर देह मा हुनुभएको समयमा, उहाँले मानिसहरूबाट चाहनुभएको समर्पणमा, तिनीहरूले कल्पना गरेजस्तो, दोष लाउने वा विरोध गर्ने कार्यबाट अलग बस्ने कुराहरू छैनन्। बरु, उहाँ मानिसहरूले जिउनका निम्ति र तिनीहरू जीवित रहने जगको रूपमा उहाँका वचनहरूलाई सिद्धान्तको रूपमा प्रयोग गरून्, तिनीहरूले उहाँका वचनहरूको सारलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा उतारून् र उहाँको इच्छा पूर्ण रूपमा पूरा गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ। मानिसहरूलाई देहधारी परमेश्‍वरको अधीनमा बस्‍न लगाउने मागको एउटा पक्षले उहाँका वचनहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कार्यलाई जनाउँछ भने, अर्को पक्षले उहाँको सामान्यता र व्यावहारिकतामा समर्पित हुन सक्‍नुलाई जनाउँछ। यी दुवै ठोस् हुनुपर्दछ। यी दुवै पक्षहरू हासिल गर्न सक्‍नेहरू सबै आफ्नो हृदयमा परमेश्‍वरप्रति साँचो प्रेम राख्‍नेहरू हुन्। तिनीहरू सबै त्यस्ता मानिसहरू हुन् जो परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिएका छन्, र तिनीहरू सबैले परमेश्‍वरलाई आफ्नो जीवनलाई प्रेम गरेजस्तै प्रेम गर्दछन्। देहधारी परमेश्‍वरले उहाँको काममा सामान्य र व्यावहारिक मानवता धारण गर्नुहुन्छ। यसरी, उहाँको सामान्य र व्यावहारिक मानवताको दुवैको बाहिरी खोल मानिसहरूका निम्ति ठूलो परीक्षा बन्छ; त्यो तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो कठिनाइ बन्छ। तापनि, परमेश्‍वरको सामान्यता र व्यावहारिकतालाई हटाउन सकिँदैन। उहाँले समाधान खोज्न हरप्रकारको कोसिस गर्नुभयो, तर अन्त्यमा उहाँले आफूलाई सामान्य मानवताको बाहिरी खोलबाट मुक्त गर्न सक्नुभएन। किनभने आखिर जे भए पनि उहाँ मानिस बन्नुभएका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुने आत्माका परमेश्‍वर हुनुहुन्न। उहाँ मानिसहरूले देख्न नसक्ने परमेश्‍वर हुनुहुन्न, तर उहाँ सृष्टिको सदस्यको खोल ओढ्नुभएको परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। यसैकारण उहाँले आफैलाई उहाँको सामान्य मानवताबाट अलग गर्नु कुनै पनि हालतमा सजिलो हुँदैन। त्यसकारण, चाहे जे भए पनि, उहाँले गर्न चाहनुभएको कामलाई उहाँले मानिसको दृष्टिकोणबाट नै गर्नुहुन्छ। यो काम सामान्य र व्यावहारिक परमेश्‍वरको अभिव्यक्ति हो, त्यसैले मानिसहरू अधीनमा नबस्नु कसरी उचित हुन्छ? मानिसहरूले परमेश्‍वरका कार्यहरूको बारेमा के पो गर्न सक्छन् र? उहाँले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ; उहाँ जुन कुरामा खुसी हुनुहुन्छ, त्यो त्यस्तै रहन्छ। यदि मानिसहरू अधीनमा बस्दैनन् भने, तिनीहरूसँग अर्को कुन राम्रा योजनाहरू हुन सक्छन्? अहिलेसम्म, केवल अधीनताले मात्रै मानिसहरूलाई मुक्ति दिन सकेको छ; कसैसँग पनि अरू कुनै राम्रा विचारहरू छैन। यदि परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई जाँच गर्न चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूले यसको बारेमा के गर्न सक्छन् र? तापनि, यी सबै कुरा स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्‍वरले सोच्नुभएको थिएन भने; यो देहधारी परमेश्‍वरले सोच्नुभएको कुरा थियो। उहाँले यो गर्न चाहनुहुन्छ, ताकि कुनै व्यक्तिले यसलाई परिवर्तन गर्न नसकोस्। स्वर्गका परमेश्‍वरले देहधारी परमेश्‍वरले गर्नुहुने कुनै पनि कार्यमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, त्यसैले के यो मानिसहरू उहाँको अधीनमा बस्नुपर्ने अझ ठूलो कारण होइन र? उहाँ व्यावहारिक र सामान्य दुवै हुनुभए पनि उहाँ पूर्ण रूपमा देहधारी परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। उहाँका आफ्नै विचारहरूको आधारमा उहाँले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ। स्वर्गका परमेश्‍वरले सबै काम उहाँलाई सुम्पनुभएको छ; उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यसप्रति तँ समर्पित हुनैपर्छ। उहाँसँग मानवता छ र धेरै सामान्य हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँले जानेर नै यी सबै मिलाउनुभएको छ, त्यसैले मानिसहरूले कसरी अचम्मित बनी अस्वीकार गर्दै उहाँलाई हेर्न सक्छन्? उहाँ सामान्य हुन चाहनुहुन्छ, यसैले उहाँ सामान्य हुनुहुन्छ। ऊ मानवताभित्र जिउन चाहनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ मानवताभित्र बस्नुहुन्छ। उहाँ ईश्‍वरत्वभित्र जिउन चाहनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ ईश्‍वरत्वमा रहनुहुन्छ। मानिसहरूले यसलाई आफूले चाहेअनुसार हेर्न सक्छन्, तर परमेश्‍वर सधैँ परमेश्‍वर नै हुनुहुनेछ र मानिसहरू सधैँ मानिस नै हुनेछ। उहाँको सारलाई सानातिना कुराको कारण अस्वीकार गर्न सकिँदैन, न त उहाँलाई परमेश्‍वरको “व्यक्ति” बाट बाहिर धकेलेर निकाल्‍न नै सकिन्छ। मानिसहरूसँग मानवजातिको स्वतन्त्रता छ, र परमेश्‍वरसित परमेश्‍वरको मर्यादा छ; यी कुराले एकअर्कालाई हस्तक्षेप गर्दैनन्। के मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई थोरै स्वतन्त्रता दिन सक्दैनन्? के तिनीहरूले परमेश्‍वर थोरै अनौपचारिक हुनुभएको सहन सक्दैनन्? परमेश्‍वरसित त्यस्तो कडा नहोओ! प्रत्येक व्यक्तिमा एक-अर्काप्रति सहिष्णुता हुनुपर्दछ; तब के सबै कुरा ठीक हुनेछैनन् र? के अझै पनि केही खिन्नता हुनेछ? यदि कसैले त्यस्तो सानोतिनो कुरालाई सहन सक्दैन भने, तिनीहरूले कसरी “प्रधानमन्त्रीको हृदय डुङ्गा खियाउनका निम्ति पर्याप्त छ” जस्तो कुरा भन्न सक्छन्? तिनीहरू कसरी साँचो मानिस हुन सक्छन्? मानवजातिका लागि कठिनाइ उत्पन्न गर्ने परमेश्‍वर हुनुहुन्न, तर मानवजातिले परमेश्‍वरका लागि कठिनाइ उत्पन्न गर्दछ। तिनीहरू सधैँ तिललाई पहाड बनाउँदै काम गर्छन्। तिनीहरूले साँच्चै शून्यताबाट कुनै कुरा बनाउँछन् र यो अत्यन्त अनावश्यक छ! जब परमेश्‍वरले सामान्य र व्यावहारिक मानवताभित्र काम गर्नुहुन्छ, तब उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो मानवजातिको काम होइन, तर परमेश्‍वरको काम हो। तापनि मानिसहरूले उहाँको कामको सारलाई देख्दैनन्; तिनीहरू सधैँ उहाँको मानवताको बाहिरी खोललाई मात्र देख्छन्। तिनीहरूले त्यस्तो ठूलो काम देखेका छैनन्, तैपनि तिनीहरूले उहाँको सामान्य र साधारण मानवतालाई देखेको छौ भनी जोड दिन्छन्, र त्यो कुरालाई छोड्दै-छोड्दैनन्। यसलाई कसरी परमेश्‍वरको अधीनमा बसेको भन्न सकिन्छ? स्वर्गका परमेश्‍वर अब पृथ्वीका परमेश्‍वरमा “परिवर्तन” हुनुभएको छ, र पृथ्वीका परमेश्‍वर अब स्वर्गका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बाहिरी रूपरङ्ग एक-समान भए पनि त्यसले फरक पार्दैन, न त उहाँहरूले वास्तवमा कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले नै कुनै फरक पार्छ। अन्त्यमा, जसले परमेश्‍वरको आफ्नै काम गर्नुहुन्छ उहाँ स्वयम् परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। तैंले चाहे पनि वा नचाहे पनि तँ अधीनमा बस्नैपर्छ—यो तैँले छनौट गर्ने विषय होइन! मानिसहरूले परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्नुपर्छ र मानिसहरू अलिकति पनि बहाना नबनाई पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरको अधीनमा बस्नुपर्छ।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९२
यदि मानिसहरूले उनीहरूको विवेकका भावनाहरूलाई मात्र सुन्छन् भने, तिनीहरूले परमेश्‍वरको प्रेमिलोपनलाई महसुस गर्न सक्दैनन्। यदि तिनीहरू पूर्ण रूपले आफ्नो विवेकमा मात्रै भर पर्छन् भने, परमेश्‍वरप्रतिको तिनीहरूको प्रेम कमजोर हुनेछ। यदि तँ परमेश्‍वरको अनुग्रह र प्रेमको ऋण तिर्ने कुरा मात्र गर्छस् भने, उहाँप्रतिको तेरो प्रेममा तँसित कुनै प्रेरणा हुनेछैन; उहाँलाई तेरो विवेकका भावनाहरूमा आधारित प्रेम गर्नु एउटा निष्क्रिय तरिका हो। म किन यो एउटा निष्क्रिय दृष्टिकोण हो भनी भन्दछु? यो एउटा व्यावहारिक विषय हो। परमेश्‍वरप्रति तिमीहरूको प्रेम कस्तो किसिमको प्रेम हो? के यो परमेश्‍वरलाई मूर्ख बनाउनु र उहाँका निम्ति झारा टार्नु होइन र? धेरै जना मानिसहरू के विश्‍वास गर्छन् भने, परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्दा कुनै इनाम छैन र उहाँलाई प्रेम गर्नेले पनि उहाँलाई प्रेम नगर्नेले जस्तै दण्ड पाउनेछ, यसैले समग्रमा पाप नगर्नु नै पर्याप्त छ। त्यसैले व्यक्तिको विवेकका अनुभूतिहरूका आधारमा परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नु र उहाँको प्रेमको ऋण फर्काउनु निष्क्रिय तरिका हो, र यो व्यक्तिको हृदयबाट आउने परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम होइन। परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम व्यक्तिको हृदयको गहिराइबाट निस्केको सच्‍चा भावना हुनुपर्दछ। कतिपय मानिसहरू भन्छन्‌: “म आफै परमेश्‍वरलाई खोज्न र उहाँको पछि लाग्न इच्छुक छु। अहिले यदि परमेश्‍वरले मलाई त्याग्न चाहनुहुन्छ भने पनि, म उहाँलाई पछ्याइरहनेछु। उहाँले मलाई चाहनुभए पनि नचाहनुभए पनि, म अझै पनि उहाँलाई प्रेम गरिरहनेछु, अनि आखिरमा मैले उहाँलाई प्राप्त गर्नैपर्छ। म मेरो हृदय परमेश्‍वरमा अर्पण गर्दछु, र उहाँले जे गर्नुभए पनि, म मेरो सम्पूर्ण जीवनभरि उहाँलाई पछ्याउनेछु। चाहे जे भए पनि, मैले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नैपर्छ र मैले उहाँलाई प्राप्त गर्नैपर्छ; जबसम्म म उहाँलाई प्राप्त गर्दिनँ तबसम्म म विश्राम लिनेछैनँ।” के तँसँग यस प्रकारको संकल्प छ?
परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने बाटो एउटै छ र यो उहाँलाई प्रेम गर्ने बाटो नै हो। यदि तँ उहाँमा विश्‍वास गर्छस् भने तैंले उहाँलाई प्रेम गर्नैपर्छ; तापनि, उहाँलाई प्रेम गर्नु भनेको उहाँको प्रेमको ऋण चुकाउनु वा तेरो विवेकका भावनाहरूको आधारमा उहाँलाई प्रेम गर्नु मात्र होइन—यो परमेश्‍वरप्रतिको चोखो प्रेम हो। कहिलेकहीँ मानिसहरूले आफ्नो विवेकको आधारमा मात्र परमेश्‍वरको प्रेम महसुस गर्न सक्दैनन्। किन मैले सधैँ यसो भनेँ: “परमेश्‍वरका आत्माले हाम्रो आत्मालाई प्रभावित गर्नुभएको होस्”? मैले किन परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न मानिसहरूका विवेकलाई प्रभावित गर्ने बारेमा कुरा गरिनँ? किनकि मानिसहरूको विवेकले परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन महसुस गर्न सक्दैन। यदि तँ यी वचनहरूद्वारा विश्‍वस्त हुँदैनस् भने, उहाँको प्रेम महसुस गर्न तेरो विवेकको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्। तँमा केही समयका निम्ति उत्साह हुन सक्छ, तर त्यो चाँडै नै हराउनेछ। यदि तैंले आफ्नो विवेकले मात्र परमेश्‍वरको प्रेम महसुस गर्छस् भने, तैंले प्रार्थना गर्दा तँ उत्साहित हुनेछस्, तर त्यो उत्साह केही बेरपछि ओइलाउनेछ र हराउनेछ। त्यस्तो किन हुन्छ? यदि तैँले तेरो विवेक मात्र प्रयोग गर्छस् भने, तैँले परमेश्‍वरप्रतिको तेरो प्रेमलाई जगाउन सक्नेछैनस्; जब तँ आफ्नो हृदयमा साँच्चै परमेश्‍वरको प्रेम महसुस गर्छस्, तेरो आत्मा उहाँद्वारा प्रभावित हुनेछ, र यो समयमा मात्र तेरो विवेकले त्यसको मूल भूमिका खेल्न सक्‍नेछ। अर्थात्, जब परमेश्‍वरले मानिसका आत्मालाई प्रभावित गर्नुहुन्छ र जब मानिससँग ज्ञान हुन्छ र उसको हृदयमा उत्साहित हुन्छ, अर्थात्, जब उसले अनुभव प्राप्त गर्दछ, तब मात्र उसले आफ्नो विवेकले परमेश्‍वरलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रेम गर्न सक्‍नेछ। तेरो विवेकले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नु गलत कुरा होइन—यो परमेश्‍वरप्रतिको सबैभन्दा तल्लो स्तरको प्रेम हो। “परमेश्‍वरको अनुग्रहको निम्ति उचित काम गरेर मात्र” प्रेम गरेर, यसले मानिसलाई सक्रिय रूपमा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित गर्नेछैन। जब मानिसहरूले पवित्र आत्माका केही काम प्राप्त गर्दछन्, अर्थात्, जब तिनीहरूले आफ्नो व्यावहारिक अनुभवमा परमेश्‍वरको प्रेम देख्छन् र महसुस गर्छन्, जब तिनीहरूसँग परमेश्‍वरको बारेमा केही ज्ञान हुन्छ र परमेश्‍वर साँच्चै मानवजातिको प्रेमको योग्य हुनुहुन्छ र उहाँ धेरै प्रेमिलो हुनुहुन्छ भनी बुझ्छन्, तब मात्र तिनीहरूले साँचो रूपमा परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न सक्छन्।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरप्रतिको सच्‍चा प्रेम स्वाभाविक हुन्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९३
जब मानिसहरू आफ्ना हृदयले परमेश्‍वरसँग सम्पर्क गर्छन्, जब तिनीहरूका हृदय पूर्ण रूपमा उहाँमा फर्कन सक्छन्, परमेश्‍वरप्रतिको मानिसको प्रेमको पहिलो चरण यही हो। यदि तँ परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न चाहन्छस् भने, तैँले पहिले आफ्नो हृदय उहाँतिर फर्काउन सक्नुपर्छ। तेरो हृदय परमेश्‍वरतिर फर्काउनु भनेको के हो? यो भनेको तैँले आफ्नो हृदयमा खोजी गर्ने सबै कुरा परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न र प्राप्त गर्नका खातिर नै गर्नु हो। तैँले आफ्नो हृदय पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरतर्फ फर्काएको छस् भन्‍ने यस कुराले देखाउँछ। परमेश्‍वर र उहाँको वचनहरू बाहेक, तेरो हृदयमा (परिवार, धनसम्पत्ति, पति, पत्नी, छोराछोरी, आदि) अरू केही पनि हुँदैन। यदि केही छ भने पनि, त्यस्ता थोकहरूले तेरो हृदयमा ठाउँ ओगट्न सक्दैनन्, र तँ आफ्नो भावी सम्भावनाहरूको बारेमा सोच्दैनस्, तर केवल परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने कार्यको पछि लाग्छस्। यस्तो समयमा तैँले आफ्नो हृदय पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरमा लगाएका हुनेछस्। मानौं, तैँले अझै पनि आफ्नो हृदयमा आफ्नो लागि योजना बनाउँदैछस् र सधैँ व्यक्तिगत फाइदाको पछि लागिरहेको छस्, र सधैँ यस्तो सोच्छस्: “मैले कहिले परमेश्‍वरसँग एउटा सानो बिन्ती गर्न सक्छु? मेरो परिवार कहिले धनी हुनेछ? मैले कसरी राम्रो लुगाफाटो पाउन सक्छु? …” यदि तँ त्यो स्थितिमा जिइरहेको छस् भने तेरो हृदय पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरतर्फ फर्केको छैन भन्ने यसले देखाउँदछ। यदि तँसँग हृदयमा परमेश्‍वरका वचनहरू मात्रै छन् र तैँले परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गर्न सक्छस् र हरसमय उहाँको नजिक हुन सक्छस् भने—मानौं उहाँ तेरो धेरै नजिक हुनुहुन्छ, मानौं परमेश्‍वर तँभित्र हुनुहुन्छ र तँ उहाँभित्र छस्—यदि तँ त्यस प्रकारको स्थितिमा छस् भने, त्यसको अर्थ तेरो हृदय परमेश्‍वरको उपस्थितिमा छ भन्ने हुन्छ। यदि तैँले हरेक दिन परमेश्‍वरसित प्रार्थना गर्छस् र प्रत्येक दिन उहाँका वचनहरू खान्छस् र पिउँछस्, सधैँ मण्डलीको कामको बारेमा सोचिरहेको हुन्छस् भने, र यदि तैँले परमेश्‍वरको इच्छालाई ध्यान दिन्छस् भने, उहाँलाई सच्‍चा प्रेम गर्न र उहाँको हृदयलाई सन्तुष्ट पार्न आफ्‍नो हृदय प्रयोग गर्छस् भने, तेरो हृदय परमेश्‍वरको स्वामित्वमा हुनेछ। यदि तेरो हृदय अन्य थुप्रै कुराहरूले कब्जा गरेको छ भने, यो अझै पनि शैतानको कब्जामा छ र यो साँचो रूपले परमेश्‍वरतर्फ फर्केको छैन। जब कसैको हृदय साँच्चै परमेश्‍वरतर्फ फर्केको हुन्छ, तिनीहरूमा उहाँको निम्ति साँचो, स्वभाविक प्रेम हुन्छ, र तिनीहरूले परमेश्‍वरको कामलाई ध्यान दिन सक्‍नेछन्। तिनीहरूसँग अझै पनि मूर्खता र विवेकहीनताका क्षणहरू हुन सक्‍ने भए तापनि, तिनीहरूले परमेश्‍वरको घर, उहाँको काम, र तिनीहरूका आफ्नै स्वभावको परिवर्तनमा चासो देखाउँछन् र तिनीहरूका हृदय सही स्थानमा हुन्छ। केही मानिसहरूले जहिले पनि तिनीहरूले गरेका सबै कुराहरू मण्डलीका लागि हुन् भनी दाबी गरिरहेका हुन्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि काम गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता किसिमका मानिसहरूसित गलत अभिप्राय हुन्छ। तिनीहरू कुटिल र छली हुन्छन् र तिनीहरूले गर्ने धेरैजसो कामहरू तिनीहरूका व्यक्तिगत फाइदाका लागि नै हुन्छन्। यस प्रकारको व्यक्तिले परमेश्‍वरको प्रेमको खोजी गर्दैन; तिनीहरूको हृदय अझै पनि शैतानको अधीनमा हुन्छ र परमेश्‍वरतर्फ फर्कन सक्दैनन्। त्यसैले यस प्रकारको व्यक्तिलाई प्राप्त गर्ने कुनै तरिका परमेश्‍वरसँग हुँदैन।
यदि तँ परमेश्‍वरलाई साँच्चै प्रेम गर्न र उहाँद्वारा प्राप्त हुन चाहन्छस् भने, पहिलो कदम तेरो हृदयलाई पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरतिर फर्काउनु हो। तैंले गर्ने प्रत्येक कार्यमा, आफैलाई जाँच् र सोध्: “के मैले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने हृदयको आधारमा यो गर्दैछु? के यसको पछि कुनै व्यक्तिगत अभिप्रायहरू छन्? यो गर्नुको मेरो वास्तविक लक्ष्य के हो?” यदि तँ आफ्नो हृदय परमेश्‍वरलाई सुम्पन चाहन्छस् भने, तैंले पहिले आफ्नै हृदयलाई वशमा राख्नुपर्छ, तेरा सबै उद्देश्यहरूलाई त्याग्नुपर्छ, र पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरको हुने अवस्था हासिल गर्नुपर्दछ। यो तेरो हृदय परमेश्‍वरलाई दिन अभ्यास गर्ने मार्ग हो। आफ्‍नो हृदयलाई वशमा पार्नु भनेको के हो? यसो गर्नु भनेको देहका अत्याधिक चाहनाहरूलाई छोडी दिनु, सुख-सुविधा वा हैसियतको आशिषको लालच नगर्नु हो। यो भनेको सबै कुरामा परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्नु, र आफ्‍नो हृदय आफ्नै निम्ति होइन तर पूर्ण रूपले उहाँको निम्ति दिनु हो। यो पर्याप्त छ।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९४
परमेश्‍वरप्रतिको साँचो प्रेम हृदयको अन्तस्करणबाट आउँछ; यो प्रेम परमेश्‍वर सम्‍बन्धी मानिसको ज्ञानको आधारमा मात्र अस्तित्वमा हुन्छ। जब कसैको हृदय पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरतिर फर्कन्छ, तब तिनीहरूमा परमेश्‍वरप्रति प्रेम हुन्छ, तर त्यो प्रेम चोखो नै हुन्छ र पूर्ण नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। किनकि व्यक्तिको हृदय पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरतर्फ फर्कनु र व्यक्तिमा परमेश्‍वरको साँचो ज्ञान हुनु र उहाँप्रति साँचो भक्ति हुनु बीच अझै केही दूरी हुन्छ। मानिसले आफ्नो हृदय परमेश्‍वरतिर लगाएर नै परमेश्‍वरको साँचो प्रेम हासिल गर्दछ र परमेश्‍वरको स्वभावलाई जान्दछ। जब मानिसले आफ्नो साँचो हृदय परमेश्‍वरमा सुम्पन्छ, तब ऊ जीवनको अनुभवमा प्रवेश गर्न थाल्छ। यसरी, उसको स्वभाव परिवर्तन हुन थाल्छ, परमेश्‍वरप्रतिको उसको प्रेम बिस्तारै बढ्दै जान्छ, र परमेश्‍वर सम्बन्धी उसको ज्ञान पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ। यसैले जीवनको अनुभवको सही मार्गमा प्रवेश गर्नुको एक मात्र पूर्वसर्त भनेको परमेश्‍वरतर्फ हृदय फर्काउनु हो। जब मानिसहरूले परमेश्‍वरको सामु आफ्नो हृदय राख्छन्, तब तिनीहरूमा उहाँको चाहना मात्र गर्ने, तर उहाँलाई प्रेम नगर्ने हृदय हुन्छ, किनकि तिनीहरूमा उहाँको बारेमा कुनै बुझाइ हुँदैन। यस्तो परिस्थितिमा तिनीहरूमा उहाँप्रति केही प्रेम हुने भए पनि, यो आफैआफ हुँदैन र यो सच्‍चा हुँदैन। किनकि मानिसको देहबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै कुरा भावनाको उपज हो र त्यो सच्‍चा ज्ञानबाट आएको हुँदैन। यो केवल क्षणिक आवेग हो र दिर्घकालीन भक्तिको रूपमा रहँदैन। जब मानिसहरूमा परमेश्‍वर सम्बन्धी ज्ञान हुँदैन, तिनीहरूले आफ्नो रुचि र तिनीहरूका व्यक्तिगत धारणाहरूको आधारमा मात्र उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छन्; यस प्रकारको प्रेमलाई स्वाभाविक प्रेम भन्न सकिँदैन, न त यसलाई सच्‍चा प्रेम नै भन्न सकिन्छ। कुनै मानिसको हृदय सच्‍चा रूपमा परमेश्‍वरतर्फ फर्कन सक्छ, र सबै कुरामा परमेश्‍वरको चासोको बारेमा सोच्न सक्छ, तर यदि उसमा परमेश्‍वरको बारेमा कुनै बुझाइ छैन भने, उसले सच्‍चा रूपले स्वाभाविक प्रेम प्राप्त गर्न सक्‍नेछैन। उसले गर्न सक्ने कुरा भनेको मण्डलीका लागि केही कार्यहरू गर्नु वा आफ्ना केही कर्तव्य पूरा गर्नु मात्र हो, तर उसले कुनै पनि आधारविना त्यसो गर्नेछ। यस प्रकारको व्यक्तिको स्वभाव परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ; त्यस्ता व्यक्तिहरू कि त सत्यको पछि लाग्दैनन्, वा त्यसलाई बुझ्दैनन्। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो हृदय सम्पूर्ण रूपले परमेश्‍वरतिर फर्कायो भने पनि, त्यसको अर्थ परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने तिनीहरूको हृदय पूर्ण रूपमा शुद्ध छ भन्ने हुँदैन, किनकि जुन मानिसहरूको हृदयमा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ तिनीहरूको हृदयमा परमेश्‍वरप्रति प्रेम हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। यो परमेश्‍वरको ज्ञानको पछि लाग्ने वा नलाग्ने व्यक्ति बीचको भिन्नतासित सम्बन्धित छ। कुनै व्यक्तिले उहाँलाई बुझेपछि, त्यसले तिनीहरूको हृदय पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरतिर फर्केको छ भन्‍ने देखाउँदछ, यसले तिनीहरूको हृदयमा भएको परमेश्‍वरप्रतिको सच्‍चा प्रेम स्वाभाविक हो भन्ने देखाउँदछ। यस प्रकारका मानिसहरूसँग मात्र तिनीहरूका हृदयमा परमेश्‍वर हुन्छ। सही बाटोमा लाग्नका निम्ति, परमेश्‍वरलाई बुझ्नका निम्ति र परमेश्‍वरको प्रेम हासिल गर्नका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त भनेको आफ्नो हृदय परमेश्‍वरतिर लगाउनु हो। यो परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने कर्तव्य पूरा भएको कुराको चिह्न होइन, न त यो उहाँप्रति सच्‍चा प्रेम छ भन्‍ने कुराको चिन्‍ह नै हो। कसैले परमेश्‍वरप्रति साँचो प्रेम हासिल गर्ने एक मात्र तरिका भनेको तिनीहरूको हृदयलाई उहाँतिर फर्काउनु हो, जुन उहाँको सृष्टिको रूपमा एक व्यक्तिले गर्नुपर्ने पहिलो काम पनि हो। परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरू सबै जीवनको पछि लाग्नेहरू हुन्, अर्थात् सत्यको पछि लाग्‍ने र साँचो रूपमा परमेश्‍वरको चाहना गर्नेहरू; तिनीहरू सबैमा पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि हुन्छ र तिनीहरू सबै उहाँद्वारा प्रभावित भएका हुन्छन्। तिनीहरू सबैले परमेश्‍वरको मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्छन्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९५
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९६
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९७
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९८
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४९९
अधिकांश मानिसहरूको परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको सारतत्त्व धार्मिक सङ्कल्प हो: तिनीहरू परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न असक्षम हुन्छन्‌ र परमेश्‍वरलाई केवल यान्त्रिक मानवले झैँ अनुसरण गर्न सक्छन्‌, परमेश्‍वरको लागि साँच्चै तृष्णा गर्न वा उहाँलाई श्रद्धा गर्न असमर्थ हुन्छन्‌। तिनीहरूले उहाँलाई केवल चुपचाप पछ्याउँछन्‌। धेरै मानिसहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्‌, तर परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरू थोरै मात्र छन्‌; तिनीहरू विपत्तिसँग डराउने भएका हुनाले मात्र तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई “श्रद्धा” गर्छन्‌, अन्यथा उहाँ उच्च र शक्तिशाली हुनुभएको हुनाले तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई “सराहना” गर्छन्‌—तर तिनीहरूको श्रद्धा र सराहनामा, प्रेम वा साँचो तृष्णा हुँदैन। आफ्ना अनुभवहरूमा तिनीहरूले सत्यताका सानातिना विवरणहरू, वा अन्यथा, केही महत्त्वहीन रहस्यहरू खोज्छन्‌। अधिकांश मानिसहरूले केवल आशिषको लागि फाइदा लुट्न पछि लाग्छन्; तिनीहरूले सत्यतालाई खोज्दैनन्, न त तिनीहरूले परमेश्‍वरको आशिष पाउनको लागि साँचो रूपमा परमेश्‍वरको आज्ञा नै पालन गर्छन्‌। सबै मानिसहरूको परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको जीवन अर्थहीन छ, यो मूल्य विहीन छ, र यसमा तिनीहरूका व्यक्तिगत विचारहरू र खोजीहरू छन्‌; तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नको लागि विश्‍वास गर्दैनन्‌, तर आशिषित हुनको खातिर मात्र गर्छन्‌। धेरै मानिसहरू आफूलाई खुसी लागे अनुसार काम गर्छन्‌; तिनीहरू आफू जे चाहन्छन्‌ त्यही गर्छन्‌ र कहिल्यै परमेश्‍वरको रुचिहरूको बारेमा, वा तिनीहरूले जे गर्छन्‌ त्यो परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार छ कि छैन भन्ने बारेमा विचार गर्दैनन्‌। यस्ता मानिसहरूले साँचो विश्‍वास समेत प्राप्त गर्न सक्दैनन्‌, परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम त परै जाओस्‌। परमेश्‍वरको सारतत्त्व मानिसले विश्‍वास गर्नको लागि मात्र होइन; अझ अधिक, यो त मानिसले प्रेम गर्नको लागि हो। तर परमेश्‍वरमाथि विश्‍वास गर्ने धेरैजसो यो “गोप्य कुरा” पत्ता लगाउन असक्षम छन्‌। मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने आँट गर्दैनन्‌, न त तिनीहरूले उहाँलाई प्रेम गर्ने प्रयत्न नै गर्छन्‌। परमेश्‍वरको बारेमा प्रेम गर्न योग्य कुराहरू यति धेरै छन्‌ भन्ने कुरा तिनीहरूले कहिल्यै पत्ता लगाएका छैनन्‌; परमेश्‍वर त मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, र उहाँ त्यो परमेश्‍वर हुनुहुन्छ जसलाई मानिसले प्रेम गर्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले कहिल्यै पत्ता लगाएका छैनन्‌। परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन उहाँको काममा व्यक्त गरिएको छ: मानिसहरूले उहाँको कामलाई अनुभव गर्दा मात्र तिनीहरूले उहाँको प्रेमिलोपन पत्ता लगाउन सक्छन्‌; तिनीहरूको वास्तविक अनुभवहरूमा मात्र तिनीहरूले परमेश्‍वरको प्रेमिलोपनलाई सराहना गर्न सक्छन्‌; र यसलाई वास्तविक जीवनमा अवलोकन नगरी, कसैले पनि परमेश्‍वरको प्रेमिलोपनलाई पत्ता लगाउन सक्दैन। परमेश्‍वरको बारेमा प्रेम गर्ने कुरा धेरै छन्, तर उहाँसँग वास्तविक रूपमा तल्लीन नभई मानिसहरू यसलाई पत्ता लगाउन असक्षम हुन्छन्‌। भन्नुको अर्थ, यदि परमेश्‍वर देह नबन्नुभएको भए, मानिसहरू उहाँसँग वास्तविक रूपमा तल्लीन हुन असक्षम हुनेथिए, र यदि तिनीहरू उहाँसँग वास्तविक रूपमा तल्लीन हुन असमर्थ भएका भए, तिनीहरू उहाँको काम अनुभव गर्न पनि समर्थ हुनेथिएनन्‌—र यसरी परमेश्‍वरप्रतिको तिनीहरूको प्रेममा अधिक असत्यता र मनगढन्तको धब्बा लाग्ने थियो। स्वर्गमा भएको परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम पृथ्वीमा भएको परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम जस्तै वास्तविक छैन, किनभने स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्‍वरको बारेमा मानिसहरूको ज्ञान तिनीहरूको आफ्नै आँखाले देखेका र तिनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेका कुराहरूमाथि भन्दा पनि तिनीहरूको कल्पनाहरूमाथि निर्माण भएको छ। जब परमेश्‍वर पृथ्वीमा आउनुहुन्छ, मानिसहरूले उहाँको वास्तविक कामहरू र उहाँको प्रेमिलोपन देख्न समर्थ हुन्छन्‌, र तिनीहरूले उहाँको व्यावहारिक र सामान्य स्वभाव देख्न सक्छन्‌, यी सबै नै स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्‍वर सम्बन्धी ज्ञानभन्दा हजारौं गुना बढी वास्तविक हुन्छन्‌। मानिसहरूले स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्‍वरलाई जतिसुकै प्रेम गरे तापनि यो प्रेम खासै वास्तविक छैन, र यो मानवीय विचारहरूले भरिएको छ। पृथ्वीमा परमेश्‍वरको निम्ति तिनीहरूको प्रेम जतिसुकै थोरै भएतापनि यो प्रेम वास्तविक हुन्छ; यो थोरै मात्र भए तापनि फेरि पनि यो वास्तविक हुन्छ। परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई वास्तविक काममार्फत उहाँलाई चिन्न लगाउनुहुन्छ, र यही ज्ञानमार्फत उहाँले तिनीहरूको प्रेम प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो पत्रुसको जस्तै हो: यदि उनी येशूसँग नजिएका भए, उसले येशूलाई श्रद्धा गर्नु असम्भव हुनेथियो। यसै गरी, येशूप्रतिको उसको निष्ठा पनि येशूसँग उसको तल्लीनतामा आधारित थियो। मानिसले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न लगाउनको लागि उहाँ मानिसको बीचमा आउनुभएको छ र मानिससँग सँगै जिउनुहुन्छ, र उहाँले मानिसलाई देख्न र अनुभव गर्न लगाउन खोज्नुभएको एउटै कुरा भनेको परमेश्‍वरको वास्तविकता हो।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरू सदाको लागि उहाँको ज्योतिभित्र जिउनेछन्‌” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५००
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५०१
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५०२
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५०३
जब मानिसहरूभित्र परमेश्‍वर जीवन बन्नुहुन्छ तब तुरुन्तै मानिसहरू परमेश्‍वरलाई त्याग्न असमर्थ हुन्छन्‌। के यो परमेश्‍वरको काम होइन र? योभन्दा महान्‌ साक्षी अरू केही छैन। परमेश्‍वरले एक निश्चित बिन्दुसम्म काम गर्नुभएको छ; उहाँले मानिसहरूलाई सेवा गर्न, सजाय पाउन वा मर्न भन्नुभएको छ, र मानिसहरू तर्किएका छैनन्‌, जसले देखाउँछ कि तिनीहरू परमेश्‍वरद्वारा जितिएका छन्‌। सत्यता भएका मानिसहरू ती हुन्‌ जो, तिनको वास्तविक अनुभवहरूमा, कहिल्यै पछि नहटी, आफ्नो साक्षीमा दृढ खडा हुन, आफ्नो स्थितिमा दृढ खडा हुन‌, परमेश्‍वरको पक्षमा खडा हुन सक्छन्‌, र जसले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूसँग सामान्य सम्बन्ध राख्न सक्छन्‌, जो, जब परिस्थितिहरू तिनीहरूमाथि आइलाग्छन्‌, परमेश्‍वरलाई पूर्ण रूपमा आज्ञापालन गर्न समर्थ हुन्छन्‌, र मृत्युसम्मै परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्न सक्छन्‌। वास्तविक जीवनमा तेरा अभ्यास र प्रकाशहरू परमेश्‍वरको साक्षी हुन्‌, ती मानिसको जियाइ र परमेश्‍वरको गवाही हुन्‌, र यो साँच्चै परमेश्‍वरको प्रेमको आनन्द उपभोग गर्नु हो; जब तैँले यस बिन्दुसम्म अनुभव गरेको हुन्छस्‌, तब चाहिने प्रभाव हासिल गरिएको हुनेछ। तँसँग वास्तविक जियाइ छ र तेरो हरेक कार्यलाई अरूहरूद्वारा सराहनासहित हेरिन्छ। तेरो पहिरन र बाहिरी रूप अउल्लेखनीय छन्‌, तर तैँले सर्वोत्कृष्ट पवित्र जीवन जिउँछस्‌, र जब तैँले परमेश्‍वरका वचनहरू बोल्छस्‌, तँ उहाँद्वारा निर्देशित र अन्तर्दृष्टि प्रदान गरिएको हुन्छस्‌। तैँले आफ्ना वचनहरूमार्फत परमेश्‍वरको इच्छा बोल्न, वास्तविकता सञ्चार गर्न समर्थ हुन्छस्‌, र तैँले आत्मामा सेवा गर्नेबारे धेरै कुरा बुझ्छस्‌। तँ तेरो बोलीमा प्रस्ट छस्‌, तँ शिष्ट र सदाचारी, मुकाबिला-नगर्ने र मर्यादाशील छस्‌, आफूमाथि विपत् आइलाग्दा परमेश्‍वरका प्रबन्धहरूको पालन गर्न र आफ्नो साक्षीमा दृढ खडा हुन समर्थ छस्‌, र जेसुकैको सामना गरेको भएतापनि तँ शान्त र सौहार्द छस्‌। यस प्रकारको व्यक्तिले साँच्चै परमेश्‍वरको प्रेम देखेको हुन्छ। केही मानिसहरू अझै पनि जवान छन्, तर तिनीहरूले कुनै अर्ध-बैँसे व्यक्तिले जस्तो व्यवहार गर्छन्‌; तिनीहरू परिपक्‍व, सत्यताले भरिएका, र अरूहरूले सराहना हुन्छन्‌—अनि यी त्यस्ता मानिसहरू हुन्‌ जससँग साक्षी छ र जो परमेश्‍वरको प्रकटीकरण हुन्‌। भन्नुको अर्थ, जब तिनीहरूले एउटा निश्चित बिन्दुसम्‍म अनुभव गरेका हुन्छन्‌, तब भित्र तिनीहरूसँग परमेश्‍वरप्रतिको अन्तर्दृष्टि रहनेछ‌, र तिनीहरूको बाहिरी स्वभाव पनि स्थिर हुनेछ। धेरै मानिसहरूले सत्यतालाई अभ्यास गर्दैनन्‌ र आफ्नो साक्षीमा दृढ खडा हुँदैनन्‌। यस्ता मानिसहरूमा परमेश्‍वरको प्रेम, वा परमेश्‍वरप्रतिको साक्षी हुँदैन, र यी यस्ता मानिसहरू हुन्‌ जो परमेश्‍वरद्वारा घिनाइएका हुन्छन्‌। तिनीहरूले भेलाहरूमा परमेश्‍वरका वचनहरू पढ्छन्‌, तर तिनीहरूले जे जिउँछन्‌ त्यो शैतान हो, र यसले परमेश्‍वरको अनादर गर्ने, परमेश्‍वरको बदख्वाइँ गर्ने, र परमेश्‍वरको निन्दा गर्ने गर्छ। यस्ता मानिसहरूमा परमेश्‍वरको प्रेमको कुनै सङ्केत हुँदैन, र तिनीहरूसँग पवित्र आत्माको काम हुँदै हुँदैन। त्यसैले, मानिसहरूका वचनहरू र कार्यहरूले शैतानको प्रतिनिधित्व गर्छन्‌। यदि तेरो हृदय सदैव परमेश्‍वरको सामुन्ने शान्तिमा छ भने, र तैँले तेरो वरिपरि भएका मानिसहरू र कुराहरूमा, र तेरो वरिपरि के हुँदैछ त्यसमा, सदैव ध्यान दिन्छस्‌ भने, र यदि तँ परमेश्‍वरको बोझप्रति विवेकी हुन्छस्‌ भने, र तँसँग सदैव परमेश्‍वरलाई श्रद्धा गर्ने हृदय छ भने, परमेश्‍वरले अक्सर तँलाई भित्रै अन्तर्दृष्टि दिनुहुनेछ। मण्डलीमा मानिसहरू हुन्छन्‌ जो “निरीक्षकहरू” हुन्‌: तिनीहरू अरूहरूको कमजोरीहरू हेर्न निस्कन्छन्‌ र त्यसपछि तिनैलाई नक्कल र अनुसरण गर्छन्‌। तिनीहरू फरक छुट्याउन असमर्थ हुन्छन्‌, तिनीहरूले पापलाई घृणा गर्दैनन्‌ र शैतानका कुराहरूद्वारा घिनाउँदैनन्‌ वा दिगमिगाउँदैनन्‌। यस्ता मानिसहरू शैतानका कुराहरूले भरिएका हुन्छन्‌, र तिनीहरू अन्ततः परमेश्‍वरद्वारा पूर्ण रूपमा त्यागिएका हुनेछन्‌। परमेश्‍वरको सामुन्ने तेरो हृदय सदैव श्रद्धालु हुनुपर्छ, तँ आफ्नो वचनहरू र कार्यहरूमा शिष्ट हुनुपर्छ र कहिल्यै परमेश्‍वरलाई विरोध गर्ने वा रिस उठाउने इच्छा गर्नुहुँदैन। तँमा परमेश्‍वरको कामलाई व्यर्थ बनाउन तँ कहिल्यै इच्छुक हुनुहुँदैन, वा तैँले सहेका सबै कठिनाइहरूलाई र तैँले अभ्यास गरेका सबै कुराहरूलाई बिना अर्थको हुन दिनु हुँदैन। तँ अघि बढ्ने मार्गमा अझ कठोर काम गर्न र परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न इच्छुक हुनुपर्छ। यी यस्ता मानिसहरू हुन् जससँग दर्शन तिनीहरूको जगको रूपमा हुन्छ। यी यस्ता मानिसहरू हुन्‌ जसले प्रगति खोज्छन्‌।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५०४
यदि मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई श्रद्धा गर्ने हृदयले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्‌ र परमेश्‍वरका वचनहरूको अनुभव गर्छन्‌ भने, यस्ता मानिसहरूमा परमेश्‍वरको मुक्ति र परमेश्‍वरको प्रेम देख्न सकिन्छ। यी मानिसहरू परमेश्‍वरलाई प्रमाणित गर्नको लागि समर्थ छन्; तिनीहरूले सत्यतालाई अभ्यास गर्छन्‌, र तिनीहरूले जे प्रमाणित गर्छन् त्यो पनि सत्यता, परमेश्‍वर जे हुनुहुन्छ र परमेश्‍वरको स्वभाव जे छ त्यो नै हो। तिनीहरू परमेश्‍वरको प्रेमको माझमा जिउँछन्‌ र तिनीहरूले परमेश्‍वरको प्रेमलाई देखेका छन्‌। यदि मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने इच्छा राख्छन्‌ भने, तिनीहरूले परमेश्‍वरको प्रेमिलोपनको स्वाद लिनुपर्छ र परमेश्‍वरको प्रेमिलोपनलाई देख्नुपर्छ; तब मात्र तिनीहरूमा परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने हृदय जगाउन सकिन्छ, एउटा यस्तो हृदय जसले परमेश्‍वरको निम्ति आफैलाई निष्ठा पूर्वक दिनको लागि मानिसहरूलाई प्रेरणा दिन्छ। परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई तिनीहरूको वचनहरू र अभिव्यक्तिहरूमार्फत वा तिनीहरूको कल्पनामार्फत उहाँलाई प्रेम गर्न लगाउनुहुन्न, र उहाँले मानिसहरूलाई उहाँलाई प्रेम गर्न लगाउनको लागि बलजफती गर्नुहुन्न। बरु, उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै इच्छाले उहाँलाई प्रेम गर्न दिनुहुन्छ, र उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको काम र उच्चारणहरूमा आफ्नो प्रेमिलोपन हेर्न दिनुहुन्छ, जसपछि तिनीहरूमा परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम जन्मिन्छ। यसरी मात्र मानिसहरूले साँच्चै परमेश्‍वरको साक्षी दिन सक्छन्‌। अरूहरूद्वारा त्यसो गर्नलाई भनिएकोले गर्दा मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्दैनन्‌, न त यो कुनै क्षणिक भावनात्मक आवेग हो। तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छन्‌ किनभने तिनीहरूले उहाँको प्रेमिलोपन देखेका छन्‌ कि मानिसहरूको प्रेमको योग्यको उहाँमा अति धेरै कुराहरू छन्‌, तिनीहरूले परमेश्‍वरको मुक्ति, बुद्धि, र अचम्मका कार्यहरू देखेका हुनाले, र यसको परिणाम स्वरूप, तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई साँच्चै प्रशंसा गर्छन्‌ र साँच्चै उहाँको तृष्णा गर्छन्‌, र तिनीहरूमा यस्तो उत्कण्ठा जाग्छ कि परमेश्‍वरलाई प्राप्त नगरी तिनीहरू बाँच्न सक्दैनन्‌। परमेश्‍वरको साँच्चै गवाही दिनेहरूले किन सानदार साक्षी दिन समर्थ हुन्छन्‌ भन्ने कुराको कारण यही हो कि तिनीहरूको साक्षी साँचो ज्ञान र परमेश्‍वरको लागि साँचो तृष्णाको जगमाथि खडा छ। यस्तो साक्षी कुनै भावनात्मक संवेगअनुसार प्रदर्शन गरिएको होइन, तर परमेश्‍वरको ज्ञान र उहाँको स्वभावअनुसार हो। तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई चिन्न आएका हुनाले, तिनीहरूले आभास गर्छन्‌ कि तिनीहरूले निश्चय नै परमेश्‍वरको गवाही दिनुपर्छ र परमेश्‍वरको लागि तृष्णा राख्नेहरू सबैलाई नै परमेश्‍वरलाई चिन्न लगाउनुपर्छ, र परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन र उहाँको वास्तविकताको बारेमा सचेत हुनुपर्छ‌। परमेश्‍वरको लागि मानिसहरूको प्रेम जस्तै, तिनीहरूको गवाही स्वतःस्फूर्त हुन्छ; यो वास्तविक हुन्छ र यसको वास्तविक महत्त्व र मूल्य हुन्छ। यो निष्क्रिय वा खोक्रो र अर्थहीन छैन। परमेश्‍वरलाई साँच्चै प्रेम गर्नेहरूसँग मात्र आफ्नो जीवनमा सर्व मूल्य र अर्थ हुनुको कारण, तिनीहरूले मात्र परमेश्‍वरमा साँच्चै विश्‍वास गर्ने कारण यही हो कि यी मानिसहरू परमेश्‍वरको ज्योतिमा जिउन समर्थ हुन्छन्‌ र परमेश्‍वरको काम र व्यवस्थापनको लागि जिउन समर्थ हुन्छन्‌। यस्तो किन हुन्छ भने तिनीहरू अन्धकारमा जिउँदैनन्‌, तर ज्योतिमा जिउँछन्‌; तिनीहरूले अर्थहीन जीवन जिउँदैनन्‌, तर परमेश्‍वरद्वारा आशिषित गरिएको जीवन जिउँछन्‌। परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरू मात्र परमेश्‍वरको गवाही दिन समर्थ हुन्छन्‌, तिनीहरू मात्र परमेश्‍वरका साक्षीहरू हुन्‌, तिनीहरूले मात्र परमेश्‍वरद्वारा आशिष पाएका हुन्छन्‌, र तिनीहरूले मात्र परमेश्‍वरका प्रतिज्ञाहरू पाउन समर्थ हुन्छन्‌। परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरू परमेश्‍वरका हितैषीहरू हुन्‌; ती परमेश्‍वरद्वारा प्रेम गरिएका व्यक्तिहरू हुन्‌, र तिनीहरूले परमेश्‍वरसँग सँगै आशिषहरूको आनन्द उपभोग गर्न सक्छन्‌। यस्ता मानिसहरू मात्र अनन्तसम्म जिउनेछन्‌, र तिनीहरू मात्र सदाको लागि परमेश्‍वरको स्याहार र सुरक्षा अन्तर्गत जिउनेछन्‌। मानिसहरूले प्रेम गरून्‌ भन्ने पक्षमा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, र उहाँ सबै मानिसहरूको प्रेमको योग्य हुनुहुन्छ, तर सबै मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न सक्षम हुँदैनन्‌, र सबै मानिसहरू परमेश्‍वरको गवाही दिन सक्दैनन्‌ र परमेश्‍वरसँगै शक्ति कायम राख्न सक्दैनन्‌। तिनीहरूले परमेश्‍वरको साक्षी दिन समर्थ हुने भएकाले र तिनीहरूले परमेश्‍वरको काममा आफ्ना सबै प्रयासहरू लगाएका हुनाले परमेश्‍वरलाई साँच्चै प्रेम गर्नेहरू स्वर्गमुनि जुनसुकै ठाउँमा कसैले तिनीहरूलाई विरोध गर्न आँट नगर्ने गरी हिँड्न सक्छन्‌, र तिनीहरूले पृथ्वीमा शक्ति अभ्यास गर्न सक्छन्‌ र परमेश्‍वरका सारा मानिसहरूमाथि शासन गर्न गर्छन्‌। यी मानिसहरू संसारभरिबाट आएका छन्‌। तिनीहरूले विभिन्न भाषा बोल्छन्‌ र तिनीहरूका वर्णहरू फरक-फरक छन्‌, तर तिनीहरूको अस्तित्वको एउटै अर्थ छ; तिनीहरू सबैसँग एउटै हृदय छ जसले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छ, तिनीहरू सबैले एउटै साक्षी प्रदान गर्छन्‌, र तिनीहरूसँग एउटै सङ्कल्प, र एउटै इच्छा छ। परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरू संसारभरि स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न सक्छन्‌, र परमेश्‍वरको साक्षी दिनेहरू ब्रह्माण्डभरि नै यात्रा गर्न सक्छन्‌। यी मानिसहरू परमेश्‍वरद्वारा प्रेम गरिएका हुन्छन्‌, तिनीहरू परमेश्‍वरद्वारा आशिषित गरिएका हुन्छन्‌, र तिनीहरू सदाको लागि उहाँको ज्योतिभित्र जिउनेछन्‌।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५०५
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५०६
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५०७
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “शोधनको अनुभव गरेपछि मात्र मानिसमा साँचो प्रेम हुन सक्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५०८
यदि मानिसहरू शैतानको प्रभावमा परे भने, तिनीहरूभित्र परमेश्‍वरप्रति कुनै प्रेम हुँदैन, र तिनीहरूको पहिलेको दर्शन, प्रेम, र संकल्प हराइसकेको हुन्छ। मानिसहरूले आफूले परमेश्‍वरको लागि कष्ट भोग्नुपर्छ भन्‍ने महसुस गर्थे, तर आज तिनीहरू त्यसो गर्नु लाजमर्दो कुरा भन्‍ने ठान्छन्, र तिनीहरूमा गुनासोहरूको कुनै कमी हुँदैन। यो शैतानको काम हो, मानिस शैतानको अधीनमा परेको छ भन्‍ने कुराको एउटा चिह्न हो। यदि तैँले यस्तो अवस्थाको सामना गरिस् भने तैंले प्रार्थना गर्नैपर्छ, र सकेसम्म त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ—यसले तँलाई शैतानको आक्रमणबाट रक्षा गर्नेछ। यो तीतो शोधनको समयमा नै मानिस सबैभन्दा सजिलोसँग शैतानको प्रभावमा पर्न सक्छ, त्यसैले त्यस्तो शोधनको अवधिमा तैँले परमेश्‍वरलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्छ? तैँले आफ्‍नो हृदय परमेश्‍वरको सामु राख्दै र तेरो हरेक समय उहाँमा समर्पण गर्दै आफ्‍नो इच्‍छालाई बटुल्‍नुपर्छ। परमेश्‍वरले तँलाई जसरी शोधन गर्नु भए पनि तैँले परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्नका लागि सत्यताको अभ्यास गर्न सक्नुपर्दछ र परमेश्‍वरलाई खोज्ने र बातचित गर्ने काम तँ आफैले गर्नुपर्छ। यस्ता समयहरूमा, तँ जति धेरै निष्क्रिय बन्छस्, त्यति नै धेरै नकारात्मक बन्छस् र तँ त्यति नै सहजै पछि हट्नेछस्। तैँले राम्ररी काम नगरे पनि जब तैँले आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तैँले आफूले गर्न सक्‍नेजति गर्छस्, र परमेश्‍वरप्रतिको तेरो प्रेम बाहेक अरू केही प्रयोग नगरी त्यसो गर्न सक्छस्; अरूले जे भने पनि—तिनीहरूले, तैँले राम्रो गरिस् भनेर भने पनि वा तैँले नराम्रो गरिस् भनेर भने पनि—तेरा अभिप्रायहरू सही हुन्छन्, र तँ स्व-धर्मी हुँदैनस्, किनकि तैँले परमेश्‍वरको तर्फबाट काम गरिरहेको हुन्छस्। जब अरूले तँलाई गलत अर्थ लगाउँछन्, तैँले परमेश्‍वरलाई प्रार्थना गर्दै यसो भन्न सक्छस्: “हे परमेश्‍वर! अरूले मलाई सहून् वा राम्रो व्यवहार गरून् भनी म भन्दिनँ, न त उनीहरूले मलाई बुझून् वा स्वीकार गरून् नै भन्छु। म केवल यति भन्छु, कि मैले आफ्नो हृदयमा तपाईंलाई प्रेम गर्न सकूँ, मैले मेरो हृदयमा आराम पाउन सकूँ, र मेरो अन्तस्करण शुद्ध होस्। म अरूले मेरो प्रशंसा गरून् वा मलाई उच्च सम्मान गरून् भनी भन्दिनँ; म केवल मेरो हृदयदेखि नै तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्न चाहन्छु; मैले जे गर्न सक्छु त्यसद्वारा म मेरो भूमिका निर्वाह गर्छु, र म मूर्ख, अबुझ, कम क्षमताको र अन्धो भए पनि तपाईं प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्‍ने म जान्दछु, र म आफूसँग भएका सबै कुरा तपाईंमा समर्पण गर्न इच्छुक छु।” तैँले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नासाथ, परमेश्‍वरप्रतिको तेरो प्रेम देखा पर्दछ, र तैँले आफ्नो हृदयमा धेरै ढुक्क महसुस गर्छस्। परमेश्‍वरको प्रेमको अभ्यास गर्नु भनेको यही हो। तैँले अनुभव गर्ने क्रममा, तँ दुई पटक असफल हुनेछस् र एक पटक सफल हुनेछस्, वा पाँच पटक असफल हुनेछस् र दुई पटक सफल हुनेछस्, र तैँले यसरी अनुभव गर्ने क्रममा, तैँले असफलताको बीचमा मात्र परमेश्‍वरको प्रेमिलोपनलाई देख्न सक्‍नेछस् र तँभित्र के कुराको कमी छ सो कुरा पत्ता लगाउन सक्छस्। जब तैँले अर्को पटक त्यस्ता परिस्थितिहरूको सामना गर्छस्, तैंले आफैलाई होसियार बनाउनुपर्छ, तेरा पाइलाहरूलाई मन्द बनाउनुपर्छ, र बारम्बार प्रार्थना गर्नुपर्छ। तैँले बिस्तारै यस्तो अवस्थामा विजय पाउने क्षमताको विकास गर्न गर्नेछस्। जब त्यस्तो हुन्छ, तेरा प्रार्थनाहरू प्रभावकारी भएको हुन्छ। जब तँ यस पटक आफूलाई सफल भएको देख्छस्, तँ भित्री रूपमा खुसी हुनेछस्, र जब तैँले प्रार्थना गर्छस् तब तैँले परमेश्‍वरलाई महसुस गर्न सक्‍नेछस्, र पवित्र आत्माको उपस्थितिले तँलाई छोड्नुभएको हुनेछैन—तब मात्रै तैँले परमेश्‍वरले कसरी तँभित्र काम गर्नुहुन्छ सो जान्‍नेछस्। यस प्रकारको अभ्यासले तँलाई अनुभवको मार्ग दिनेछ। यदि तैंले सत्यलाई अभ्यास गरिनस् भने, तब तँभित्र पवित्र आत्माको उपस्थिति हुनेछैन। तर जब तैँले कुनै कुरालाई जस्ताको त्यस्तै रूपमा सामना गर्दा तैँले सत्यतालाई अभ्यास गरिस् भने, त्यस बेला त्यसले तँलाई भित्र चोट पुर्‍याए पनि, पछि पवित्र आत्मा तेरो साथमा हुनुहुनेछ, तैंले प्रार्थना गर्दा तैँले परमेश्‍वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सक्नेछस्, तँसँग परमेश्‍वरको वचनहरू अभ्यास गर्ने शक्ति हुनेछ, र तेरा आफ्ना दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूसँग कुराकानी गर्दा, तेरो विवेकमा कुनै कुराको बोझ हुनेछैन र तैँले शान्ति महसुस गर्नेछस्, र यसरी तैँले आफूले गरेका कामहरूलाई प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछस्। अरूले जेसुकै भने पनि, तैँले परमेश्‍वरसँग सामान्य सम्बन्ध राख्न सक्नेछस्, तँ अरूको करमा पर्नेछैनस्, तँ सबै कुराभन्दा माथि उठ्नेछस्—र यसमा, तैंले गरेको परमेश्‍वरको वचनको अभ्यास प्रभावकारी भएको कुरालाई प्रदर्शन गर्नेछस्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५०९
पत्रुसले आफ्नो जीवनकालमा सयौं पटक शोधनको अनुभव गरे, र धेरै पीडादायी कठिनाइहरू भोगे। यही शोधन परमेश्‍वरप्रतिको तिनको सर्वोच्च प्रेमको जग र उनको सम्पूर्ण जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुभव बन्यो। एक अर्थमा, परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने तिनको संकल्प कै कारण तिनमा उहाँप्रति सर्वोच्च प्रेम थियो; तापनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तिनी जुन शोधन र कष्टबाट गुज्रिए त्यसकै कारण त्यस्तो भएको थियो। त्यो कष्ट नै परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने मार्गमा तिनको पथप्रदर्शक र तिनको निम्ति सबैभन्दा स्मरणीय कुरा बन्यो। यदि मानिसहरू परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्दा शोधनबाट गुज्रदैनन् भने तिनीहरूको प्रेम अशुद्धता र आफ्नै प्राथमिकताहरूले भरिएको हुन्छ; यस प्रकारको प्रेम शैतानका विचारहरूले भरिएको हुन्छ, र परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न आधारभूत रूपमै असमर्थ हुन्छ। परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने संकल्प हुनु र परमेश्‍वरलाई साँच्चै प्रेम गर्नु एउटै कुरा होइन। तिनीहरूले आफ्नो मनमा परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने र सन्तुष्ट पार्ने कुरा मात्र सोचे पनि, र तिनीहरूका विचारहरू पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरप्रति समर्पित र कुनै मानवीय विचारविहीन देखिए पनि, तिनीहरूका विचारहरू परमेश्‍वरको सामु ल्याइएपछि उहाँले त्यस्ता विचारहरूलाई प्रशंसा गर्नुहुन्न वा आशिष्‌ दिनुहुन्न। मानिसहरूले सबै सत्यलाई राम्ररी बुझेको अवस्थामा समेत—तिनीहरूले सबै कुरा थाहा पाएको अवस्थामा पनि—त्यसलाई परमेश्‍वरप्रतिको प्रेमको सङ्केत भन्न सकिँदैन, यी मानिसहरूले साँच्चै परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्दछन् भन्न सकिँदैन। शोधनबाट नगुज्रिकन मानिसहरूले धेरै वटा सत्यताहरू बुझेका भए पनि, ती सत्यताहरूलाई अभ्यास गर्न सक्दैनन्; शोधनको अवधिमा मात्र मानिसहरूले यी सत्यताहरूको वास्तविक अर्थ बुझ्न सक्दछन्, तब मात्र मानिसहरूले वास्तविक रूपमा तिनको भित्री अर्थलाई बुझ्‍न सक्छन्। त्यस बेला, जब तिनीहरूले फेरि प्रयास गर्छन्, तिनीहरू सत्यलाई उचित रूपमा र परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार अभ्यास गर्न सक्षम हुन्छन्; त्यस समयमा उनीहरूका मानवीय विचारहरू कम हुन्छन्, तिनीहरूको मानव भ्रष्टता कम भएको हुन्छ, र उनीहरूका मानवीय भावनाहरू घटेका हुन्छन्; त्यस बेला मात्र तिनीहरूको अभ्यास परमेश्‍वरको प्रेमको वास्तविक अभिव्यक्ति हुन्छ। परमेश्‍वरप्रतिको प्रेमको सत्यताको प्रभाव मौखिक ज्ञान वा मानसिक तत्परताबाट प्राप्त हुन सक्दैन, न त यो त्यस सत्यलाई बुझेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि मानिसहरूले मूल्य चुकाउनुपर्छ, तिनीहरू शोधनको अवधिमा धेरै तीतोपनबाट गुज्रिनुपर्छ, र तब मात्र तिनीहरूको प्रेम शुद्ध र परमेश्‍वरको हृदय अनुसारको हुनेछ।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५१०
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५११
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५१२
अहिले तँ कुन कुराको पछि लाग्नुपर्छ? तैँले परमेश्‍वरको कामको साक्षी दिन सके पनि, नसके पनि, तँ परमेश्‍वरको गवाही र प्रकटीकरण हुन सके वा नसके पनि, अनि तँ उहाँद्वारा प्रयोग हुन योग्यको भए पनि नभए पनि—तैँले खोज्‍नुपर्ने कुराहरू यिनै हुन्। परमेश्‍वरले तँभित्र साँच्चै कति काम गर्नुभएको छ? तैँले कति देखेको छस्? तैँले कति छोएको छस्? तैँले कति अनुभव गरेको र चाखेको छस्? चाहे परमेश्‍वरले तँलाई जाँच्नुभएको होस्, तेरो निराकरण गर्नुभएको होस्, वा तँलाई अनुशासनमा राख्‍नुभएको होस्, उहाँका व्यवहारहरू र उहाँको काम तँमा पूरा भएको छ। तर परमेश्‍वरको विश्‍वासी र उहाँद्वारा सिद्ध हुने कुराको पछि लाग्ने व्यक्तिको रूपमा, के तँ आफ्नो व्यावहारिक अनुभवको आधारमा परमेश्‍वरको कामको साक्षी दिन सक्छस्? के तँ आफ्नो व्यावहारिक अनुभवद्वारा परमेश्‍वरको वचनअनुसार जिउन सक्छस्? के तँ आफ्नै व्यावहारिक अनुभवद्वारा अरूका निम्ति जुटाउन सक्छस् र आफ्‍नो सम्पूर्ण जीवन परमेश्‍वरको कामको साक्षी दिन खर्चन सक्छस्? परमेश्‍वरको कामको साक्षी दिनका लागि तँ आफ्नै अनुभव, ज्ञान र तैँले चुकाएको मूल्यमा भर पर्नुपर्छ। यसरी मात्र तैँले उहाँको इच्छालाई सन्तुष्ट पार्न सक्छस्। के तँ परमेश्‍वरको कामको साक्षी दिने व्यक्ति होस्? के तँमा यस्तो आकांक्षा छ? यदि तँ उहाँको नाउँको, अझ बढी उहाँको कामको साक्षी दिन सक्छस् भने, अनि उहाँले आफ्ना मानिसहरूबाट माग गर्नुभएको स्वरूप लिएर जिउन सक्छस् भने तँ परमेश्‍वरका निम्ति एक साक्षी होस्। तँ वास्तवमा कसरी परमेश्‍वरको साक्षी बन्छस्? तँ परमेश्‍वरको वचनको खोजी गर्दै र त्यस अनुसार जिउने कोसिस गर्दै, तेरा वचनहरूद्वारा साक्षी दिँदै, मानिसहरूलाई उहाँको काम जान्‍ने र उहाँका कामहरू देख्‍ने तुल्याउँदै यो गर्छस्। यदि तँ साँच्‍चै यी सबै कुराको खोजी गर्छस् भने, परमेश्‍वरले तँलाई सिद्ध पार्नुहुनेछ। यदि तँ परमेश्‍वरबाट सिद्ध पारिन र अन्त्यसम्मै आशिषित हुन मात्र खोज्‍छस् भने परमेश्‍वरमा भएको तेरो विश्‍वासको दृष्टिकोण शुद्ध छैन। तँ वास्तविक जीवनमा परमेश्‍वरका कामहरू देख्ने, उहाँले तँलाई आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुहुँदा त्यो कसरी पूरा गर्ने त्यसको पछि लाग्नुपर्छ, र उहाँको आश्‍चर्यपन र बुद्धिको साक्षी तैँले कसरी दिनुपर्छ, अनि उहाँले कसरी तँलाई अनुशासनमा राख्‍नुहुन्छ र निराकरण गर्नुहुन्छ त्यसको साक्षी कसरी दिने सोको खोजी गर्नुपर्छ। यी सबै तैँले विचार गरिरहेको हुनुपर्ने कुराहरू हुन्। यदि परमेश्‍वर उहाँले तँलाई सिद्ध पार्नुभएपछि तँ उहाँको महिमामा सहभागी हुन सक्छस् भनेर मात्रै तँ परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छस् भने, त्यो अझै अपर्याप्त हुन्छ र तैँले परमेश्‍वरका मागहरू पूरा गर्न सक्दैनस्। तँ परमेश्‍वरको कामको साक्षी दिन, उहाँका मागहरू पूरा गर्न र उहाँले मानिसहरूमा व्यावहारिक रूपमा गर्नुभएको कामको अनुभव गर्न सक्ने हुनुपर्छ। चाहे पीडा होस्, आँसु होस् वा उदासी होस्, जे भए पनि तैँले आफ्नो अभ्यासमा यी सबै कुरा अनुभव गर्नुपर्छ। ती सबैको उद्देश्य परमेश्‍वरको साक्षी दिने व्यक्तिको रूपमा तँलाई सिद्ध बनाउनु हो। वास्तवमा, त्यो कुन कुरा हो जसले तँलाई कष्ट भोग्‍न र सिद्धता खोज्‍न बाध्य गर्छ? के तेरो वर्तमान दुःख भोगाइ साँच्चै परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न र उहाँको साक्षी दिनको खातिर नै हो? वा के यो शरीरको आशिषहरू, र तेरो भविष्यको सम्भावना र गन्तव्यको निम्ति हो? तेरा उद्देश्यहरू, अभिप्रायहरू र तैँले खोजी गर्ने लक्ष्यहरू सबैलाई सुधारिनुपर्छ अनि ती तेरा आफ्नै इच्छाद्वारा निर्देशित हुन सक्दैनन्। यदि एक व्यक्तिले आशिषहरू पाउन र अधिकारसहित शासन गर्नका निम्ति सिद्धताको खोजी गर्छ, अनि अर्को व्यक्तिले चाहिँ परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न, परमेश्‍वरको कामको व्यावहारिक साक्षी बन्न सिद्धताको पछि लाग्छ भने खोजी गर्ने यी दुईवटा उपायमध्ये तँ कुनलाई चुन्‍नेछस्? यदि तैँले पहिलोलाई चुनिस् भने तँ परमेश्‍वरको मापदण्डहरूबाट अझै पनि टाढा हुनेछस्। मेरा कामहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा खुल्लमखुल्ला जानिनेछ र म एक राजाको रूपमा ब्रह्माण्डमा शासन गर्नेछु भनेर मैले एक पटक भनेँ। अर्कोतिर, तिमीहरूलाई सुम्पिएको काम भनेको गएर परमेश्‍वरको कामको साक्षी दिनु हो, राजाहरू बनेर सारा ब्रह्माण्डमा देखा पर्नु होइन। ब्रह्माण्ड र आकाशमण्डल परमेश्‍वरका कामहरूले भरिऊन्। तिनलाई सबैले देखून् र तिनलाई स्वीकार गरून्। यी वचनहरू परमेश्‍वर स्वयम्‌को सम्बन्धमा बोलिएका हुन्, अनि मानव जातिले गर्नुपर्ने काम भनेको परमेश्‍वरको साक्षी दिनु हो। अहिले तँ परमेश्‍वरलाई कतिसम्म जान्दछस्? तँ परमेश्‍वरको कतिसम्म साक्षी दिन सक्छस्? परमेश्‍वरले मानिसलाई सिद्ध पार्नुको उद्देश्य के हो? परमेश्‍वरको इच्छा बुझेपछि, तैँले उहाँको इच्छाप्रति कसरी विचार प्रकट गर्नुपर्छ? यदि तँ सिद्ध पारिने इच्छा गर्छस् र आफ्‍नो जियाइद्वारा परमेश्‍वरको कामको साक्षी दिन चाहन्छस् भने, यदि तँमा यो प्रेरक शक्ति छ भने, कुनै पनि कुरा त्यत्ति कठिन हुँदैन। मानिसहरूलाई अहिले चाहिने भनेको विश्‍वास नै हो। यदि तँसित यो प्रेरक शक्ति छ भने तँलाई कुनै पनि नकारात्मकता, निष्क्रियता, अल्छीपन र शरीरका विचारहरू, जिउनेसम्बन्धी दर्शनशास्त्रहरू, विद्रोही स्वभाव, भावनाहरू र त्यस्तै अन्य कुराहरू त्याग्न सजिलो हुन्छ।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५१३
जाँचहरूबाट भएर जाँदा मानिसहरू कमजोर हुनु वा उनीहरूभित्र नकारात्मकता हुनु वा परमेश्‍वरको इच्छा वा तिनीहरूका अभ्यासको मार्गबारे स्पष्ट नहुनु सामान्य कुरा हो। तर कुनै पनि अवस्थामा परमेश्‍वरको कामप्रति तँमा विश्‍वास हुनुपर्छ, अनि जसरी अय्यूबले परमेश्‍वरलाई इन्कार गरेनन्, तैँले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन। अय्यूब कमजोर थिए र तिनले आफू जन्मेको दिनलाई धिक्कारे पनि, तिनले मानव जीवनमा सबै थोकहरू यहोवाले नै दिनुहुन्छ र उहाँले नै सबै थोक लैजानुहुन्छ भन्‍ने कुरालाई इन्कार गरेनन्। तिनलाई जसरी जाँचिएको भए पनि तिनले यो विश्‍वास थामेर राखे। तेरो अनुभवमा तँ परमेश्‍वरको वचनद्वारा जस्तै शोधनबाट भएर जानु परे पनि, संक्षेपमा, परमेश्‍वरले मानव जातिबाट चाहनुभएको कुरा भनेको तिनीहरूका विश्‍वास र उहाँको निम्ति तिनीहरूको प्रेम नै हो। यस्तो प्रकारले काम गरेर उहाँले मानिसहरूको विश्‍वास, प्रेम र आकांक्षाहरूलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ। परमेश्‍वरले मानिसहरूमा सिद्ध पार्ने काम गर्नुहुन्छ, र तिनीहरूले त्यो देख्न सक्दैनन्, त्यो अनुभव गर्न सक्दैनन्; त्यस्तो परिस्थितिहरूमा, तेरो विश्‍वास आवश्यकता हुन्छ। मानिसहरूको विश्‍वास त्यत्ति बेला चाहिन्छ जब कुनै कुरा मानिसको नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन, तेरो विश्‍वास त्यसबेला चाहिन्छ, जब तँ आफ्ना धारणाहरूलाई त्याग्न सक्दैनस्। जब परमेश्‍वरको कामको विषयमा तँमा स्पष्टता हुँदैन, त्यसबेला तँबाट चाहिने कुरा भनेको तैँले विश्‍वास गर्नुपर्छ र तैँले दह्रो धारणा लिएर र साक्षी बनेर खडा हुनुपर्छ भन्‍ने हो। जब अय्यूब यो स्थितिमा पुगे परमेश्‍वर तिनीकहाँ देखा पर्नुभयो र तिनीसँग बोल्नुभयो। अर्थात्, तेरो भित्रको विश्‍वासद्वारा मात्र तैँले परमेश्‍वरलाई देख्न सक्छस्, अनि जब तँमा विश्‍वास हुन्छ परमेश्‍वरले तँलाई सिद्ध बनाउनुहुन्छ। विश्‍वासविना उहाँले यो गर्न सक्नुहुन्न। तैँले जे प्राप्त गर्ने आशा गरेको छस्, परमेश्‍वरले त्यो तँलाई दिनुहुनेछ। यदि तँसँग विश्‍वास छैन भने तँलाई सिद्ध बनाउन सकिँदैन, तैँले परमेश्‍वरका कामहरू देख्न सक्दैनस्, उहाँको सर्वशक्ति देख्‍ने कुरा त परै जाओस्। जब आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा उहाँका कार्यहरू देख्‍न सक्‍ने विश्‍वास तँमा हुन्छ, तब परमेश्‍वर तँकहाँ देखा पर्नुहुनेछ, र उहाँले तँलाई ज्ञान दिनुहुनेछ अनि भित्रबाट तँलाई डोर्याउनुहुनेछ। त्यो विश्‍वासविना परमेश्‍वरले त्यसो गर्न सक्‍नुहुनेछैन। यदि तैँले परमेश्‍वरमा आशा गुमाएको छस् भने, तैँले कसरी उहाँको कामको अनुभव गर्न सक्‍नेछस् र? त्यसकारण, तँमा विश्‍वास छ र तैँले परमेश्‍वरप्रति शङ्का गर्दैनस् भने मात्र, उहाँले जे गर्नुभए पनि उहाँप्रति तँमा साँचो विश्‍वास छ भने मात्र उहाँले तँलाई तेरा अनुभवहरूद्वारा ज्ञान र प्रकाश दिनुहुनेछ, तब मात्र तैँले उहाँका कामहरू देख्न सक्‍नेछस्। यी सबै कुराहरू विश्‍वासद्वारा नै प्राप्त गरिन्छ। विश्‍वास शोधनबाट मात्र आउँछ, अनि शोधनको अनुपस्थितिमा विश्‍वास बढ्न सक्दैन। यो “विश्‍वास” भन्‍ने शब्दले केलाई जनाउँछ? विश्‍वास भनेको कुनै कुरा देख्न वा छुन नसक्दा, परमेश्‍वरको काम मानिसका विचारहरूसँग मेल नखाँदा, त्यो मानव जातिको पहुँचभन्दा पर हुँदा मानव हृदयमा हुने सच्‍चा आस्था र इमानदार हृदय हो। मैले यही विश्‍वासको बारेमा कुरा गरेको हुँ। कठिनाइ र शोधनको समयमा मानिसहरूलाई विश्‍वास चाहिएको हुन्छ, अनि विश्‍वास यस्तो कुरा हो जुन शोधन पछि आउँछ; शोधन र विश्‍वासलाई अलग गर्न सकिँदैन। परमेश्‍वरले जसरी काम गर्नुभए पनि र तेरो वातावरण जस्तोसुकै भए पनि तँ जीवनलाई अनि सत्यतालाई खोजी गर्न अनि परमेश्‍वरको कामको ज्ञानलाई खोज्न, उहाँका कामहरूलाई बुझ्न सक्‍छस्, अनि तँ सत्यताअनुसार कार्य गर्न सक्छस्। यसो गर्नु नै साँचो विश्‍वास हुनु हो, अनि त्यसो गर्दा तैँले परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास हराएको छैनस् भन्ने देखिन्छ। यदि तँ शोधनद्वारा सत्यताको खोजीमा लागिरहन्छस् भने, यदि तँ साँच्चै परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न सक्छस् र उहाँमा शङ्का गर्दैनस् भने, यदि उहाँले जे गर्नुभए पनि तँ उहाँलाई सन्तुष्ट पार्न सत्यताको अभ्यास गर्छस् भने, र यदि तँ गहिरो रूपले उहाँको इच्छा खोज्छस् र उहाँको इच्छामा ध्यान दिन्छस् भने मात्र तैँले परमेश्‍वरमा साँचो विश्‍वास प्राप्त गर्न सक्छस्। विगतमा, जब तैँले एक राजाले जस्तो शासन गर्नेछस् भनी परमेश्‍वरले भन्नुभयो, तब तैँले उहाँलाई प्रेम गरिस्, अनि जब उहाँले आफैलाई खुल्लमखुल्ला तेरो सामु देखाउनुभयो, तँ उहाँको पछि लागिस्। तर अहिले परमेश्‍वर लुक्नुभएको छ, तँ उहाँलाई देख्न सक्दैनस्, र तँमाथि समस्याहरू आएका छन्—के अब तैँले परमेश्‍वरमा आशा गुमाइस्? यसैले, तैँले हरसमय जीवनको खोजी गर्नुपर्छ र परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसैलाई वास्तविक विश्‍वास भनिन्छ, र यो सबैभन्दा साँचो र सुन्दर किसिमको प्रेम हो।
विगतमा, मानिसहरू सबै तिनीहरूका संकल्प गर्न परमेश्‍वरको सामु आउथे, र तिनीहरू भन्थे: “यदि कसैले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्दैन भने पनि मैले उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ।” तर अहिले, तपाईंमाथि शोधन आउँछ, अनि यो तेरा विचारहरूसँग नमिल्‍ने हुनाले तैँले परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासलाई गुमाउँछस्। के यो सच्‍चा प्रेम हो? तैँले अय्यूबका कामहरूको बारेमा धेरै चोटि पढेको छस्—के तैँले तिनको बारेमा भुलेको छस्? साँचो प्रेमको आकार भित्रको विश्‍वासबाट मात्र बन्छ। तपाईं जुन शोधनबाट भएर जान्छस्, त्यसद्वारा परमेश्‍वरको निम्ति साँचो प्रेमको विकास गर्छस्, अनि तेरो विश्‍वासद्वारा तँ आफ्नो व्यावहारिक अनुभवहरूमा परमेश्‍वरको इच्छाको विषयमा विचारशील बन्न सक्छस्, अनि विश्‍वासद्वारा नै तँ आफ्नो शरीर त्याग्न र जीवनको पछि लाग्न सक्छस्; मानिसले गर्नुपर्ने यही नै हो। यदि तैँले यसो गरिस् भने तैँले परमेश्‍वरका कामहरू देख्न सक्‍नेछस्, तर यदि तँमा विश्‍वासको कमी छ भने तैँले परमेश्‍वरका कार्यहरू देख्न वा उहाँको काम अनुभव गर्न सक्नेछैनस्। यदि तँ परमेश्‍वरद्वारा प्रयोग हुन र सिद्ध पारिन चाहन्छस् भने, तँमा सबै थोक हुनुपर्छ: दुःख भोग्ने इच्छा, विश्‍वास, धैर्य, आज्ञापालन, र परमेश्‍वरको काम अनुभव गर्ने क्षमता, उहाँको इच्छा बुझ्नु, उहाँको दुःखलाई विचार गर्नु र यस्तै अरू कुराहरू। व्यक्तिलाई सिद्ध बनाउनु सजिलो हुँदैन, र तैँले अनुभव गर्ने प्रत्येक शोधनको निम्ति तेरो विश्‍वास र प्रेम चाहिन्छ। यदि तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पारिन चाहन्छस् भने बाटोमा हतार-हतार अगि बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, न ता तैँले आफैलाई परमेश्‍वरका निम्ति खर्चनु नै पर्याप्त हुन्छ। परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पारिएको व्यक्ति हुनका निम्ति तँमा धेरै वटा कुराहरू हुनुपर्छ। जब तँ दुःखको सामना गर्छस्, त्यसबेला तैँले देहका चिन्ताहरू एकातिर पन्साउन सक्नुपर्छ र परमेश्‍वरको विरुद्धमा गुनासो गर्नुहुँदैन। जब परमेश्‍वरले आफैलाई तँदेखि लुकाउनुहुन्छ, तँ उहाँको पछि लाग्‍न सक्‍ने, तेरो प्रेमलाई डगमगाउन र बिलाउन नदिई आफ्नो विश्‍वासलाई थामेर राख्न सक्ने हुनुपर्छ। परमेश्‍वरले जे गर्नुभए पनि तँ उहाँको योजनामा समर्पित हुनुपर्छ, अनि उहाँको विरुद्ध गुनासो गर्नुको साटो उहाँको योजनामा समर्पित हुन र तेरो आफ्नै शरीरलाई सराप्न तयार हुनुपर्छ। जब तैँले जाँचहरूको सामना गर्छस् तँ नराम्रो घतले रुनु पर्ने भए पनि वा कुनै प्रिय वस्तुसित अलग्गिन अनिच्छुक महसुस गर्नु पर्ने भए पनि तैँले परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ। यो मात्र साँचो प्रेम र विश्‍वास हो। तेरो वास्तविक कद जे-जस्तो भए पनि तँमा कठिनाइ सहने इच्छा र साँचो विश्‍वास, दुवै हुनुपर्छ, अनि तँमा देहलाई त्याग्ने इच्छा पनि हुनुपर्छ। परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न तँ व्यक्तिगत कठिनाइहरू सहन र तेरा व्यक्तिगत रुचिहरू गुमाउन तयार हुनुपर्छ। तँ आफ्नो हृदयमा आफ्नै बारेमा पछुतो गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ: विगतमा तँ परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न असक्षम थिइस्, र अहिले तैँले आफै पछुतो गर्न सक्छस्। यी कुनै पनि कुरामा तँ पछि पर्नु हुँदैन—यिनै कुराहरूद्वारा परमेश्‍वरले तँलाई सिद्ध तुल्याउनुहुनेछ। यदि तँ यी मानदण्डहरू पूरा गर्न सक्दैनस् भने तँलाई सिद्ध तुल्याइन सकिँदैन।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५१४
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५१५
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५१६
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५१७
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५१८
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ५१९
मानिसले परमेश्‍वरका कार्यहरूको अनुभव गर्छ, आफूले आफैलाई चिन्छ, आफ्नो भ्रष्ट स्वभावलाई सफा गर्छ, र जीवनमा वृद्धि खोज्छ, र यी सबै कुरा परमेश्‍वरलाई चिन्नको निम्ति नै गर्छ। यदि तँ आफूलाई जान्न र आफ्नै भ्रष्ट स्वभावको सामना गर्न मात्र खोजिरहन्छस्, तर परमेश्‍वरले मानिसमा के कार्य गर्नुहुन्छ, उहाँको मुक्ति कति महान् छ, वा तैँले परमेश्‍वरको कामको अनुभव कसरी गर्छस् र उहाँको कार्यको साक्षी कसरी दिन्छस् भन्ने कुराको बारेमा तँलाई कुनै ज्ञान छैन भने, तेरो अनुभव व्यर्थ हो। यदि तँ सत्यलाई अभ्यास गर्न र सहन सक्षम भएकोले मात्रै जीवनले परिपक्वता पाउँछ भन्‍ने सोच्छस् भने, यसको तात्पर्य तैँले अझै पनि जीवनको साँचो अर्थ वा मानिसलाई सिद्ध बनाउने परमेश्‍वरको उद्देश्य बुझेको छैनस् भन्ने हो। एक दिन जब तँ धार्मिक मण्डलीहरूमा, पश्‍चातापी मण्डली वा आजीवन मण्डलीका सदस्यहरूमाझ हुन्छस्, तैँले धेरै धर्मनिष्ठ मानिसहरू भेट्नेछस्, जसको प्रार्थनामा “दर्शन” हुन्छ र जो आफ्नो जीवनको अनुसरणको क्रममा, वचनहरूबाट छोइएका र निर्देशित भएका हुन्छन्। साथै, तिनीहरू थुप्रै कुरा सहन र आफूलाई त्याग गर्न, र देहबाट नडोर्याइन सक्षम हुन्छन्। त्यस समयमा, तँ भिन्नता छुट्याउन असक्षम हुनेछस्: उनीहरूले जे गर्छन् त्यो सही हो, जीवनको स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो भनेर तैँले विश्‍वास गर्छस्, र उनीहरूले जुन नाममा विश्‍वास गर्छन् त्यो गलत हो भन्‍ने कुरा अफसोसको कुरा हो। के यस्ता विचारहरू मूर्ख होइनन् र? धेरै मानिसहरूको जीवन हुँदैन भनेर किन भनिन्छ? किनभने तिनीहरू परमेश्‍वरलाई चिन्दैनन्, र तसर्थ उनीहरूको हृदयमा कुनै परमेश्‍वर छैन, र तिनीहरूको जीवन छैन भनेर भनिन्छ। यदि परमेश्‍वरमा तेरो विश्‍वास यस्तो अवस्थामा पुगेको छ जहाँ तँ परमेश्‍वरका कार्यहरू, परमेश्‍वरको वास्तविकता, र परमेश्‍वरको कामको हरेक चरण राम्ररी जान्न सक्षम छस् भने, तँमा सत्य निहित छ। यदि तँलाई परमेश्‍वरको कार्य र स्वभाव थाहा छैन भने, तेरो अनुभवमा अझै पनि केही छुटिरहेको छ। येशूले आफ्‍नो कामको त्यो चरण कसरी पूरा गर्नुभयो, यो चरण कसरी सम्पन्न भइरहेको छ, परमेश्‍वरले कसरी अनुग्रहको युगमा आफ्‍नो काम गर्नुभयो र के कार्य गरियो, यस चरणमा कुन कार्य भइरहेको छ—यदि तँसँग यी थोकहरूको बारेमा विस्तृत ज्ञान छैन भने, तैँले कहिले पनि सुनिश्‍चितताको महसुस गर्नेछैनस् र तँ सधैँ असुरक्षित हुनेछस्। यदि, अनुभवको अवधिपछि, परमेश्‍वरले गर्नुभएको कार्य र उहाँको कार्यको हरेक चरणलाई जान्न तँ सक्षम हुन्छस्, र यदि तैँले परमेश्‍वरले उहाँको वचनहरू बोल्दा त्यसमा रहेका उद्देश्यहरू र उहाँले बोल्नुभएका यति धेरै वचनहरू किन पूरा भएका छैनन् भन्ने बारेमा विस्तृत ज्ञान हासिल गरिस् भने, तँ चिन्ता र शोधनबाट मुक्त भई निडर भएर र नरोकिइकन अगाडिको बाटोमा अघि बढ्न सक्‍नेछस्। परमेश्‍वरले कुन माध्यमबाट आफ्नो कार्यमा यति धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर तिमीहरूले हेर्नुपर्छ। धेरै प्रकारका वचनहरूका माध्यमबाट मानिसलाई शोधन गर्दै र मानिसका धारणाहरूलाई रूपान्तरण गर्दै, उहाँले आफूले बोल्ने वचनहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तिमीहरूले सहेका सबै कष्टहरू, तिमीहरूले भोगेका सबै शोधनहरू, तिमीहरूले आफूभित्र स्वीकार गरेका निराकरणहरू, तिमीहरूले अनुभव गरेका अन्तर्दृष्टिहरू-यी सबै परमेश्‍वरले बोल्नुभएका वचनहरूको माध्यमबाट प्राप्त भएका हुन्। मानिसले केको खातिर परमेश्‍वरलाई पछ्याउँछ? उसले परमेश्‍वरको वचनको कारण पछ्याउँछ गर्दछ! परमेश्‍वरका शब्दहरू गहन रूपले रहस्यमय हुन्छन्, साथै यी वचनहरूले मानिसको हृदयलाई हल्लाउन सक्छन्, हृदयभित्र तल गाडिएका कुराहरूलाई प्रकट गर्न सक्छन्, उसलाई विगतमा घटना भएका कुराहरू थाहा दिन, र भविष्यमा प्रवेश गर्न दिन सक्छन्। त्यसैले मानिस परमेश्‍वरको वचनहरूका कारण कष्ट सहन्छ, र परमेश्‍वरको वचनहरूकै कारणले उसलाई सिद्ध पनि बनाइन्छ: केवल यस समयमा मात्र व्यक्तिले परमेश्‍वरलाई पछ्याउँछ। यस अवस्थामा मानिसले के गर्नुपर्दछ भने परमेश्‍वरको वचनहरूलाई स्विकार्नु पर्छ, र उसलाई सिद्ध बनाइएको वा शोधनको लागि बाध्य बनाएको भए पनि, परमेश्‍वरका वचनहरू नै मुख्य कुरा हो। परमेश्‍वरको कार्य यही हो, र यो मानिसले आज थाहा पाउनुपर्ने दर्शन पनि हो।
अघिल्लो: जीवनमा प्रवेश (३)
अर्को: जीवनमा प्रवेश (५)